ဒေါက်တာဇော်လီး (အော စာအုပ်များ နှင့် မွတ်စလိမ် အောကားများ): November 2013
ဒေါက်တာဇော်လီး (အော စာအုပ်များ နှင့် မွတ်စလိမ် အောကားများ)
♥မြန်မာ Admin တည်ထောင်ထားတဲ့ ဆိုဒ် ဖြစ်တယ်။အောစာအုပ်တွေနဲ့ မွတ်စလိမ် အောကားတွေကို အထူးတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။
ဒေါင်းလုပ် လင့်ခ် နဲ့တင်ပေးထားသည်။မိမိဖတ်ရှုလိုသော ကြည့်လိုသော
စာအုပ်များ မွတ်အောကားများကို ဒေါင်းယူ ကြည့်ရှုကြပေလော့♥
♕အောဆိုဒ်တော်တော်များများက ပို့စ် တွေကို copy ကူးယူပြီး
ဒါ့ကြောင့်သက်ဆိုင်ရာ ဆိုဒ် များအားလုံးကို Credit ပေးပါသည်။
★မှတ်ချက်(၇၈၆ ကုလားများလုံးဝမလာရ)★ Sunday, November 17, 2013
မနက်စောစော နိုးလာကတည်းက ဦးမင်းမောင်တယောက် စိတ်ကတော်တော်ထန်နေမိသည်။ အိမ်ကနေ ငါးကန်ကိုရောက်နေတာ ၃ ရက်ရှိသွားပြီ။ အိမ်မှာတုံးက မိန်းမကို နေ့တိုင်း ဆက်ဆံဖြစ်သည်။ ရာသီလာသည့်နေ့တွေတောင် အစပိုင်း အလာများသော ရက်နှစ်ရက်လောက်သာရှောင်ဖြစ်သည်။ နောက်ရက်များမှာတော့ ဆက်ဆံဖြစ်သည်ချည်းပင်။ ချစ်ဇနီးကလည်း လုံးကြီးပေါက်လှ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ရေဆေး ငါးကြီး အသွင် အရွယ်ကလည်းကောင်းတုံးဆိုတော့ ကိုယ်က ဘယ်အချိန်လို
ချင်ချင် အမြဲတန်း အဆင်သင့်၊ ဘယ်တော့မှ ငြင်းသည်မရှိ။ မစားရတာ ၃ ရက်သာရှိသေးသည် ဖွားဘက်တော်က မနက် ကတည်းက ဒုက္ခ ပေးနေသည်။ တဲပေါ်
တွင်ထိုင်ရင်း ဖွဲစာရင်းတွက် ငါးမျိုး စာရင်းတွက်လုပ်ရင်း စိတ်ကို တခြားဘက်ပို့လဲ ခနပင်၊ ဒီစိတ်က ထ ထ နိုင်လွန်းသည်။ အိမ်ကိုပြန်ပြီး အိမ်က မိန်းမကို ပြန်လုပ်
ရအောင် ကလည်း ကန်မှာ ငါးခြင်းမျိုး လာစရာရှိလို့ လာစောင့်နေရတော့ ခက်နေသည်။
ဦးမင်းမောင်သည် အသက်က ၄၀ သာရှိသေးသည်။ ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလေးလုပ်ကြည့်ရာ အကျိုးပေးသဖြင့် သာ ငါးကန်သို့ မကြာမကြာလာနေရသည် လူက
မြို့မှာဘဲပျော်သည်။ အိမ်ထောင်ကျသည်မှာ ၁၀နှစ်ခန့် ရှိပြီ ဖြစ်ပြီး ကလေး ၃ ယောက်ရှိသည်။ သူ့မိန်းမက သူ့ထက် ၄ နှစ်ခန့်ငယ်ပြီး အလွန်ပင်ချောမောလှသူဖြစ်
သည်။အိမ်ထောင်မကျခင်ကတော့ ယောက်ကျားပီသစွာပင် အပျော်ရှာခဲ့ပြီး မ ဘက်တွင်လည်း အောက်သက်ကျေခဲ့ သူ ဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက်မှာ
တော့ ချစ်ဇနီးတယောက်ထဲကိုသာ တလက်ကိုင် လုပ်နေခဲ့သူဖြစ် သည်။ သူ့ ဇနီးကလည်း သူ့ လိုအင်ဆန္ဒကို ပြည့်ပြည့်၀၀ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သူဖြစ်သည့်အတွက် အိမ်ထောင် မှုသုခ ကောင်းကောင်းရနေခဲ့သဖြင့် ပြင်ပတွင် အပျော်မရှာဖြစ်တော့သည်မှာ ကြလှပြီဖြစ်သည်။ အဖော် ကောင်းလျှင် တော့ တခါတရံ အနှိပ်ခန်း သို့ရောက်ဖြစ်သည်။ ဒီထက်တော့ မပိုခဲ့။
ဒီနေ့ ဖြစ်နေပုံက နဲနဲလွန်လွန်းသည်။ မနေ့က ညစာကြွေးတော့ ငုံးဥပြုတ် ၄-၅ လုံးစားလိုက်မိလို့လားတော့မသိ။ ဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်သည်၊ အိမ်မှာလည်း အိမ်ရှင်မက
သူကောင်းကောင်းလိုချင်ပြီဆိုလျှင် ငုံးဥပြုတ် တို့ ပြားရည်တို့ တိုက်တတ်သည်။ သူ့ ငါးကန်က ဧက ၅၀ လောက်ကျယ်၍ ကန်စောင့် အလုပ်သမား ၄ ယောက်
ထားရသည်။ ၂ ယောက်က လူပျိုလူလွတ် နှစ်ယောက်က အိမ်ထောင်သည်။ အိမ်ထောင်သည်တွေက မိသားစုပါခေါ်၍ ကန် ပေါင်ပေါ်က တဲတွင်နေသည်။ ကန်ပေါင်ပေါ်တွင် ထောင့်လေးထောင့်၌ တဲလေးလုံးထိုး၍ လေးဖွဲ့ စောင့်အိပ်ကြရ သည်။ ဦးမင်းမောင်ကတော့ သူလာသည့်အခါ အခိုင်အမာဆောက်ထားသော ပင်မတဲကြီးပေါ်တွင်နေသည်။ ဤတဲပေါ်တွင် တန်ဘိုးရှိပစ္စည်းများထားသောကြောင့် အခိုင်အမာဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
မနက် ၈ နာရီ ကျော်နေပြီ ဖြစ်သဖြင့် အလုပ်သမားများမှာ ငါးစာ ကြွေးပြီး ကန်ပေါင်နေရာအသီးသီးတွင် မြက်ရှင်းသူကရှင်း ဘောင်ပြင်သူကပြင်နေကြသည်။
ဦးမင်းမောင်လည်း တဲပေါ်မှ အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းကို ယူ၍ ဟိုဟိုဒီဒီ လျှောက်ကြည့်နေမိသည်။ ကန်ကကျယ်သောကြောင့် အဝေးမှမြင်နိုင်ရန် မှန်ပြောင်းများ ၀ယ်၍ တဲတိုင်း၌ တခုစီပေးထားခဲ့သည်။ မှန်ပြောင်းနှင့်လျှောက်ကြည့်ရင်း အလုပ်သမားများ အလုပ်လုပ်နေသည်ကို မြင်နေရသည်။ ဘာရယ်မဟုတ် ဟိုဟိုဒီဒီ
လျှောက်ကြည့်ရင်း ကိုမြကြီးတို့တဲဘက် ရောက်သွားသည်။ ကိုမြကြီးမိန်းမတယောက် ကန်ဘောင်ပေါ်က သူ့စိုက်ခင်းလေးမှာ တကုတ်ကုတ်နှင့် အလုပ်ရှုပ်နေသည်
ကို မြင်နေရသည်။ မှန်ပြောင်းက ဆွဲအားတော်တော်ကောင်းတော့ ပုံရိပ်ထဲမှလူက ကိုယ့် လက်တကမ်းရောက်နေ သလိုရှင်းရှင်းလင်းမြင်နေရသည်။ ကိုမြကြီးမှာ ကန်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သဖြင့် ကန်လုပ်ငန်းများကို ဦးစီး နေသူဖြစ်သည်။ အသက်က ၅၀ ကျော်လောက်ရှိပြီး ဦးမင်းမောင်၏ လူယုံလည်းဖြစ်သည်။ အစစ အရာရာ စိတ်ချရသူဖြစ်ပြီး သူ့မိန်းမ မကြော့ကလည်း သူနှင့်မတိမ်းမရိမ်း ဖြစ်ပြီး ကန်ရှိ လူပျိုနှစ်ယောက်ကို ထမင်း ချက် ကြွေးနေ သူဖြစ်သည်။
နောက်အိမ်ထောင်ရှင်တယောက်က မောင်ငယ်ဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်ကျသည်မှာ ၂ နှစ်ခန့်ရှိပြီ ဖြစ်ပြီး ကလေး တယောက်မွေးထားသည်မှာ ၆ လ ခန့်သာရှိသေး
သည်။ မောင်ငယ်တို့ တဲမှာ ကိုမြကြီးတို့ တဲရှိရာ ကန်ထောင့် နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ထောင့်တွင်ရှိသည်။ ဦးမင်းမောင် မှန်ပြောင်း မောင်ငယ်တို့ တဲဘက်ရောက်သွား ချိန်မှာ မြင်ရသောမြင်ကွင်းကြောင့် ဦးမင်းမောင် ရင်ထဲ ဒိတ်ကနဲ ဖြစ်သွားသည်။ မောင်ငယ့်မိန်းမ မိတူးမာ မှာ တဲ ကပြင်တွင် သူ့ကလေးကို နို့တိုက်နေခြင်းဖြစ်
သည်။ မိတူးမာ သူ့ကလေးကို နို့တိုက်သည်ကို ဦးမင်းမောင် မကြာမကြာမြင်ဘူးနေပြီး ရိုးနေပြီ ဖြစ်သော်လည်း ခုတခါမှာတော့ အဝေးက သူမ မသိအောင်ခိုးကြည့်
နေရ သလို ဖြစ်နေတာရော ဦးမင်းမောင်ကိုယ်တိုင်က တော်တော်ထန်နေတာရော မိတူးမာ က သူတယောက်တည်း မို့ လွှတ်လွှတ်လပ်လပ် အပေါ်အင်္ကျီတောင်
မ၀တ်ဘဲ အပေါ်ပိုင်း တုံးလုံးကြီး ချွတ်ပြီး နို့တိုက် နေသည် ကို တွေ့ရတော့ ဦးမင်းမောင် အသက်ရှူမှားနေရချင်းဖြစ်သည်။ မိတူးမာသည် အသက် က ၁၉ နှစ်
ခန့်ရှိပြီး တောသူတောင်သား လက်လုပ်လက်စားဖြစ်လေတော့ အသားအရေ တင်းတင်း ရင်းရင်းနှင့် ညိုညိုညက်ညက် ဖြစ်သည်။ ကလေးမွေးထားကာစ ကလေးနို့
တိုက်နေသူဆိုတော့ သူ့နို့ကြီးက နို့ရည်တွေ ဖြင့် တင်းနေပြီး အကြီးကြီးဖြစ်နေသည်။ နကိုကတည်းက နို့ကြီးသူဖြစ်ပြီ့း ကလေးနို့တိုက်နေတော့ နို့ရည်ဝင်ပြီး ပိုပြီးကြီးနေရ ခြင်းဖြစ်သည်။ ဦးမင်းမောင်သည် မိတူးမာကလေးနို့တိုက်နေသည်ကို မှန်ပြောင်းဖြင့် ကြည့် ကောင်းကောင်းဖြင့် ကြည့်နေလိုက်သည်။ သူ့ကို ကြည့်နေ
သည်ကို မသိရှာသော မိတူးမာက လွတ်လပ်စွာပင် ကလေးက နို့လွှတ်ပြီး ဆော့နေသောအခါတွင်လည်း နို့ကို မဖုံးဘဲ ဒီအတိုင်းထားလေသည်။
မိတူးမာ၏ နို့က လည်း တွဲရွဲမနေဘဲ တင်းတင်းရင်းရင်းရှိနေရာ မှန်ပြောင်းထဲတွင် အနီးကပ်မြင်နေရသော ဦးမင်းမောင်မှာ လက်တဘက်က သူ့ ငယ်ပါကိုကိုင်၍ ပွတ်သပ်နေမိတော့သည်။ ကြည့်နေရင်းမှ မိတူးမာသည် ကလေးနို့တိုက် ခြင်းကို ရပ်လိုက်ပြီး ကလေးကို တဲထဲသို့ ပို့လိုက်ကာ တဲအပြင်သို့ ပြန်ထွက်လာသည်။ တဲအပြင်ရောက်မှ ခုနက ခါးတွင်ပတ်ထား သော ထမီကို ရင်လျှားလိုက်လေသည်။ ထိုအခါမှ ဦးမင်းမောင်မှာ သက်ပြင်းကြီးကို ချနိုင် တော့လေသည်။
ဦးမင်းမောင်၏ ရမက်ဆန္ဒကတော့ မိတူးမာ နို့တိုက်နေသည်ကို မြင်ပြီးကာမှ ပိုဆိုးလာနေတော့သည်။ မထူးတော့သည့် အတူတူ စိတ်ပြေလက်ပျောက် ဂွင်းထိုင်ထု
နေမိတော့သည်။ ဂွင်းထုရင်း မိတူးမာတို့တဲဘက်ကို လည်း မကြာမကြာ လှမ်းကြည့်မိသည်။ မှန်ပြောင်းမပါသဖြင့် လူရိပ်တော့မြင်နေရသည် ဘာလုပ်နေသည်ကို တော့ သဲသဲကွဲကွဲမမြင်ရပေ။ ကြည့်နေရင်း မိတူးမာ တဲအရှေ့ ရေထဲသို့ဆင်းသွားသည်ကိုမြင်လိုက်ရသဖြင့် ဂွင်းထုနေချင်းကို ချက်ချင်းရပ်လိုက်ပြီး မှန်ပြောင်းကို ပြန်ဆွဲလိုက်ပြီး ကြည့်လိုက်မိပြန်သည်။ မိတူးမာက ကန်ထဲဆင်းပြီးရေချိုးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကန်ထဲတွင် ရေခန စိမ်ပြီး ပြန်တက်လာကာ ကန်စပ် တွင်ရေချိုးရန်
ပြုလုပ်ထားသော ၀ါးခင်းပေါ်တွင် ထိုင်ချလိုက်သည်။ ထို့နောက် ဆပ်ပြာတုံးကိုယူ၍ ကိုယ်လုံးအပေါ်ပိုင်းကို ဆပ်ပြာတိုက်နေလေသည်။ ပုခုံး နှင့် လက်မေါင်းများ တိုက်ပြီးသောအခါ သူ့ထမီကို ဖြည်ချလိုက်ရာ သူ့နို့ နှစ်လုံးမှာဘွားကနဲပေါ်လာလေတော့သည်။ မိတူးမာသည် သူမ၏ နို့နှစ်လုံးကို ဆပ်ပြာတုံးဖြင့် ကျကျနန တိုက်ပြီး သူ့ထမီထဲသို့ လက်နှိုက်ကာ ပေါင်ကြားကိုလည်း ဆပ်ပြာဖြင့် သေသေချာချာတိုက်နေပြန်သည်။ ပြီးတော့မှ သူ့ခြေထောက်နှင့် မျက်နှာတို့ကို ဆပ်ပြာ
တိုက်ပြီး ထမီကို ရင်လျှားပြန်စည်းလိုက်သည်။ ထို့နောက် ကန်ထဲသို့ ပြန်ဆင်းပြီး တကိုယ်လုံးကို ဆေးကျော၍ ကန်ဘောင်ပေါ်သို့ပြန်တက်လာသည်။ ထို့နောက် တဲအနား ရှိ တန်းတွင်လှန်းထားသော ထမီ အခြောက်တထည်ကိုလှန်းယူလိုက်ပြီး သူ့ထမီအစို အပေါ်မှ ထပ် ၀တ်လိုက် သည်။ ပြီးထမီအစိုကိုချွတ်ချလိုက်ရာ အနားတွင်လူ တဦးမှ မရှိသဖြင့် ဖြစ်သလိုချွတ်ချလိုက်သဖြင့် ထမီ အခြောက်ပါ ကျွတ်ကျသွားလေသည်။ ထိုအခါ မိတူးမာ၏ ၀တ်လစ်စားလစ် ကိုယ်လုံးကို ဦးမင်းမောင်မှာ အတိုင်းသား မြင်လိုက်ရတော့သည်။ မိတူးမာက ကျွတ်ကျသွားသော ထမီကို ချက်ချင်းကောက်ဝတ်လိုက်သော် လည်း သူမ၏ ပေါင်ကြားမှ မဲနက်နေသော အမွှေးတောကြီးကို ဦးမင်းမောင်မှာ အားရပါးရ ရှုစားလိုက်ရပေ တော့သည်။ မိတူးမာက ထမီကိုပြန်ဝတ်ရင်း ဟိုကြည့်ဒီကြည့် လုပ်ရာ ဦးမင်းမောင်ရှိ
သည့် တဲကြီးဘက်သို့ မျက်စေ့ ရောက်လာ လေသည်။ သူ့ဘက်ကိုကြည့်နေ သော မိတူးမာ၏ ပုံရိပ်သည် ဦးမင်းမောင်၏ မှန်ပြောင်း ထဲတွင် ရှင်းရှင်းကြီး ပေါ်လာ
ရာ ဦးမင်းမောင်မှာ ယုတ်တယက် လူမိသလိုဖြစ်သွားပြီး မှန်ပြောင်းကို တခြားဘက် သို့ ချက်ချင်း လှည့် လိုက်လေသည်။ နောက်မှ သူ့ကို မိတူးမာ အဝေးမှ မမြင်လောက်ပါဘူးဟု ယူဆသဖြင့် မိတူးမာတို့တဲဘက်သို့ ပြန်ကြည့်လိုက်ရာ မိတူးမာသည် သူ့တဲထဲသို့ဝင်သွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ ဦးမင်းမောင်က မှန်ပြောင်းကို ခနချထားလိုက်ပြီး မိတူးမာ အပြင်ထပ်ထွက်လာနိုး နှင့် ဆက်လက်ကြည့်ရှုနေရာ ခနကြာသောအခါ မိတူးမာ ထမီရင်လျှားဖြင့် တဲအပြင်သို့ပြန်ထွက်
လာပုံကိုမြင်ရပြန်သဖြင့် မှန်ပြောင်းကို ပြန်ချိန် ကြည့်လိုက်ရာ မိတူးမာ သည် မှန်ပြောင်းဖြင့် မိမိဘက်သို့လှန်းကြည့်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့သည်။ ရုတ်တ
ယက် ဦးမင်းမောင် ရော မိတူးမာပါ အကြည့်ကို မလွှဲမိဘဲ နှစ်ယောက်သား မှန်ပြောင်းထဲမှတဆင့် တဦး ကို တဦး စိုက်ကြည့်နေမိ ကြပါသည်။ ဦးမင်းမောင်က အရင် အကြည့်လွှဲလိုက်ပြီး တခြားဘက်သို့ လျှောက် ကြည့်နေလိုက်ပြီး စိတ်ထဲ တွင်တော့ ကောင်မလေး ငါချောင်းနေတာကို သိသွားပြီထင်တယ်ဟု တွေးမိပြီး စိတ်ပူသွားပါသည်။ မောင်ငယ့်ကိုတော့ပြန်မပြောလောက်ပါဘူးလေဟု စိတ်ထဲမှာ တထင့်ထင့်နှင့်တွေးနေမိ ပါသည်။ ကိုယ့် အလုပ်သမားကောင်လေးရဲ့ မယားကို
ချောင်းတာ လူမိသွားတော့ မျက်နှာလည်းတော်တော် ပူသွား မိပါသည်။ ခုနက ထကြွသောင်းကြမ်းနေသော စိတ်လည်း ရုတ်တယက် ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ပျောက်သွားပါတော့သည်။ နေ့လည် ထမင်းစားပြီးချိန်လောက်တွင် ငါးခြင်းမျိုးများ ရောက်လာ၍ ဦးမင်းမောင် ရော အလုပ်သမားများပါ အလုပ်တော်တော် ရှုပ်သွား
ကြပါသည်။ ညနေစောင်းတွင် မှ အားလုံးပြီးသွား၍ ရေမိုးချိုးပြီး ဒေါ်ကြော့ချက်ကြွေးသော ထမင်းကိုမြိန်ရေရှက်ရေစားလိုက်ကြပါသည်။ ဦးမြကြီးက
“ဆရာ မနက်ဆို ပြန်မယ်မို့လား ကျနော် သင်္ဘောဆိပ်လိုက်ပို့မယ်လေ။ မနက်ဆို ရေက ၆ နာရီလောက်ဆို တက်တော့မှာ၊ ၈ နာရီလောက်သွားရင် အတော်ဘဲ။”
“ကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာ၊ ရန်ကုန်မှာလည်း လုပ်စရာအလုပ်သိပ်မရှိတော့ မလောပါဘူး။”
ညပိုင်းမှာ ဦးမြကြီးတို့ လင်မယားရော မောင်ငယ်တို့ လင်မယားရော ကျန်တဲ့ကောင်လေးနှစ်ယောက်ပါ ဦးမင်းမောင်၏ တဲကြီးတွင် တီဗွီလာထိုင်ကြည့်ကြပါသည်။ ဦးမင်းမောင်တဲမှာက ဘက်ထရီအိုးနဲ့ ဖွင်တဲ့ တီဗွီ ရှိတော့ သူတို့တွေ နေ့တိုင်း လာကြည့်နေကျဖြစ်သည်။ ဦးမင်းမောင်က မိတူးမာကို မသိမသာ အကဲခပ်ကြည့် လိုက်ရာ မိတူးမာက မသိ သလို တီဗွီကိုဘဲ မဲကြည့်နေပါသည်။ ပါလာသောကလေးကို ဒီတခါ နို့လှန်တိုက်ရာ ဦးမင်းမောင်မှာ မသိမသာ ချောင်းနေမိပါသည်။ ခါတိုင်းလဲ သူ့ရှေ့ မှာ ကလေးနို့တိုက်နေကျကို မနက်တုံးက မြင်ပြီးကတည်းက ဦးမင်းမောင်မှာ မမြင့်တမြင်ကို လှန်းလှန်းကြည့်ပြီး ရင်ခုံနေရပါသည်။ ည ၉ နာရီလောက် တွင် အားလုံး အလျှိုလျှို ပြန်ကုန်ကြတော့ရာ ဦးမင်းမောင်လည်း တီဗွီပိတ်ပြီး အိတ်ယာဝင်လိုက်ပါ သည်။ တောမှာက ညဆို ၉ နာရီ အိပ်ခြင်းသည်
ပင်လျှင် နောက်ကျနေပါသေးသည်။ မနက်ဆို ၅ နာရီလောက် ထကြပြီး အလုပ် စ ကြရပေမည်။
ဦးမင်းမောင်သည် တော်တော်နှင့်အိပ်မပျော်နိုင်ဘဲ မိတူးမာ၏ နို့ကြီးနှစ်လုံးနှင့် ၀တ်လစ်စားလစ် ကိုယ်လုံးကို သာ မြင်ယောင်နေသဖြင့် မိတူးမာကို စိတ်ကူးဖြင့် လုပ်ရင်း ဂွင်းထုလိုက်တော့မှ မောပြီးအိပ်ပျော်သွားပါတော့ သည်။
မနက်မိုးလင်းသောအခါ မနေ့က အိမ်အရမ်းပြန်ချင်နေသော ဦးမင်းမောင်တယောက် ပြန်စကားလုံးဝမပြော တော့ပါ။ လာမေးသာ ဦးမြကြီးကို တရက် နှစ်ရက်
နေဦးမယ်ဗျာဟု ပြောလိုက်ရာ ဦးမြကြီးပင် နဲနဲ အံ့သြသွားပါ သည်။ ခါတိုင်း ကိစ္စတွေပြီးတာနဲ့ မှီရာနဲ့ အိမ်တန်းပြန်တတ်တဲ့ သူ့ဆရာ ဒီတခါ ဘာဖြစ်ပါလိမ့်၊ ဆရာကတော် နဲ့များ ကတောက်ကဆ ဖြစ်လာလို့များလားလို့တောင်တွေးမိပါသေးသည်။
ဦးမင်းမောင်ကတော့ အလုပ်သမားများ အသီးသီး လုပ်ငန်းခွင်ဝင်သွားသည်နှင့် မှန်ပြောင်းတလက်နှင့် အလုပ် ရှုပ်ပါတော့သည်။ မျှော်လင့်ထားသလိုပါပင် ခနအကြာတွင် မိတူးမာတယောက် ကပြင်ပေါ် ကလေးပိုက်ပြီး ထွက်လာပါတော့သည်။ ဒီတခါမှာတော့ မိတူးမာမှာ အပေါ်အင်္ကျီဝတ်ထားတာကိုတွေ့ရသည်။ ဦးမင်းမောင်မှာ မနေ့ကလိုများတွေ့ရဦးမလားဟု မျှော်လင့်ထားသမျှ ခဲလေသမျှ သဲရေကျဖြစ်ရသဖြင့် စိတ်ပျက်သွားမိပါသည်။ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် မြင်ရသလောက်
ဘဲကြည့်ရတာပေါ့ဟူသော စိတ်ကူးဖြင့် ဆက်လက်ကြည့်နေစဉ်မှာ ပင် သူ့မြင်ကွင်းထဲတွင် မိတူးမာက သူ့ဘက်ကို ကြည့်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ဒီတခါတွင်
တော့ ဦးမင်းမောင် သည် မှန်ပြောင်းကို မလွှဲတော့ဘဲ ဆက်ပြီးစိုက်ကြည့်နေလိုက်သည်။ မိတူးမာက ဦးမင်းမောင် ဘက် ကြည့်နေ ရာမှ ရုတ်တယက် နို့တလုံးလှန်
တိုက်နေသော သူ့ အင်္ကျီကို မ လိုက်ပြီး ခေါင်းပေါ်ကနေ ချွတ်ချ လိုက်လေ သည်။ မိတူးမာမှာ မနေ့ကလို အပေါ်ပိုင်းတုံးလုံးဖြစ်သွားရာ ဦးမင်းမောင်တယောက် ဖိုးကျိုင်းတုတ် ဖြစ်သွားရ လေတော့ သည်။ မိတူးမာက ကလေးမစို့သော နို့တလုံးကို သူမရဲ့ လက်နဲ့ အသာလေး ပွတ်သတ်နေရာ ဦးမင်းမောင်မှာ မိတူးမာနို့ကို
စိုက်ကြည့်နေရင်း မှ မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်မိလေသည်။ ထိုအခါ မိတူးမာက ဦးမင်းမောင်ရှိရာ ဘက်လှည့်ပြီး ပြုံးနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။
“သြော် သူကသိနေတာကိုး၊ သိသိကြီးနဲ့ ငါ့ကိုတမင်ကလိနေတာပေါ့လေ၊ ကြည့်ကြသေးတာပေါ့” ဟု
စိတ်ထဲတွင်ကျိန်းဝါးလိုက်ပြီး မိတူးမာကိုဘဲ ဆက်လက်ကြည့်နေလိုက်ပါသည်။ မိတူးမာက မနေ့ကလိုပင် ကလေးကို တဲထဲသို့ ပို့လိုက်ပြီး ပြန်ထွက်လာသောအခါ လက်ထဲတွင် မှန်ပြောင်းပါလာပြန်ပါသည်။ မှန်ပြောင်းဖြင့် ဦးမင်းမောင်ဘက်သို့တချက်လှမ်းကြည့်ပြီး ဦးမင်းမောင်နှင့်အကြည့်ချင်းဆုံလိုက်ပါသည်။ ပြီးနောက် မှန်ပြောင်း ကိုချလိုက်ပြီး မနေ့ကလိုပင် ရေချိုးရန်ပြင်ပါတော့သည်။ ဒီနေ့ရေချိုးရာတွင်တော့ ဦးမင်းမောင် ကြည့်နေမှန်း သိသိ ကြီးနှင့် မနေ့ကထက်ပင် ပို၍ ဆပ်ပြာကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်တိုက်ပြပါသည်။ ရေချိုးပြီး၍ ထမီလဲသောအခါ တွင်လည်း မနေ့ကကဲ့သို့ မလဲတော့ဘဲ သူမ၏ ထမီအစိုကို ကွင်းလုံးချွတ်ချလိုက် ပြီးမှ အခြောက်ကိုပြန်ဝတ် လိုက်ပါသည်။ အားလုံးလုပ်ပြီးသောအခါ မှန်ပြောင်းကိုယူပြီး ဦးမင်းမောင်ဘက်ကို တခါပြန်ကြည့်လိုက်ပြန်ပါ သည်။ ဒီတခါတွင်တော့ ဦးမင်းမောင်က မိတူးမာကို ပြုံးပြီး လက်မျှောက်ပြလိုက်ပါ သည်။ မိတူးမာကလည်း ဦးမင်းမောင်ကို ပြန်ပြုံးပြ လိုက်ပါသည်။
ဦးမင်းမောင်သည်လည်း ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ဒီကောင်မလေး ရလောက်ပြီဆိုသည်ကို သိလိုက်သော်လည်း အလုပ်စရန် လမ်းစရှာရပါတော့သည်။ ခနလောက် စဉ်းစားလိုက်သောအခါ ရွှေဦးဏှောက်က အကြံကောင်းတခု ရလာပါသည်။ ဦးမင်းမောင်သည် ဦးမြကြီးကိုခေါ်လိုက်ပြီး ငါးစာတိုင်ထပ်တိုးရန် ရွာထဲမှ ၀ါးသွားတိုက်
ရန် ပြော လိုက်ပါသည်။ ရွာဆိုသည်မှာလည်း စက်လှေတတန် ခြေကျင်တတန်သွားရသည်ဖြစ်ရာ ယခု အချိန်စထွက်လျှင် တောင် ညမှောင်မှ ပြန်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး
ခိုင်းသော အလုပ်ကလည်း ၄ ယောက်စလုံးလုပ်မှ အဆင်ပြေမည် ဖြစ်သဖြင့် ဦးမြကြီး သူ့တပည့်အားလုံးကိုခေါ် ပြီး ထမင်းအမြန်စားခိုင်းလိုက်ကာ ကသုတ်က
ယက်ထွက်သွား ပါတော့သည်။ ဒေါ်ကြော့ကိုလည်း ပ ထုတ်ရန်လိုသေးသဖြင့် ရွာထဲမှ လိုအပ်သည်များကို တပါတည်းဝယ်လာ နိုင်ရန် လိုက်သွားခိုင်းလိုက်ပါသည်။ ဒေါ်ကြော့က
“ဆရာ ထမင်းစားဖို့ မိတူးမာကိုမှာထားခဲ့တယ်၊ သူလာပြီး ပြင်ကျွေးလိမ့်မယ် ”
ဟုပြောလိုက်ရာ အရာအားလုံးသည် ရေကန်အသင့်ကြာအသင့်ဖြစ်သွားပါတော့သည်။
ဦးမြကြီးတို့အားလုံး ၁၀ နာရီလောက်တွင် ထွက်သွားကြပါသည်။ မိတူးမာက ၁၁ နာရီခန့်တွင် ကလေးချီ၍ ဦးမင်းမောင်၏တဲပေါ်သို့ရောက်လာပါသည်။ ကုလေးကို အဆင်သင့်ရှိသော ပုခက်ပေါ်တွင်ထားခဲ့ပြီး ဒေါ်ကျော့ တို့ တဲတွင် ချက်ထားခဲ့သော ထမင်းဟင်းများကို သွားယူလာပါသည်။ ဦးမင်းမောင်၏ တဲသို့ပြန်ရောက်သော အခါ မိတူးမာက
“ဆရာကြီး ထမင်းစားတော့မလား၊ မိတူးမာ ပြင်ပေးမယ်လေ”
မိတူးမာက ထမင်းအိုးများကိုနေရာချနေစဉ်မှာပင် ပုခက်ထဲမှ ကလေးက နိုးလာပြီး ငိုပါတော့သည်။ မိတူးမာက ကလေးကို ချီလိုက်ပြီး ဦးမင်းမောင်ရှေ့ ဖျာပေါ်
တွင် ထိုင်ချလိုက်ပါသည်။ ပြီးနောက် သူမ၏ အင်္ကျီကို မ တင် လိုက်ပြီး ကလေးအား နို့စ တိုက်ပါတော့သည်။ အင်္ကျီကိုမတင်ရာတွင် အရင်က တခြားသူများရှိပါက
နို့တလုံး ချင်း ဖေါ်တိုက်သလိုမျိုးမလုပ်ဘဲ နို့ နှစ်လုံးစလုံးကိုဖေါ်၍ တိုက်ပါတော့သည်။ ဦးမင်းမောင်ကလည်း သူ့အရှေ့ တွင် ထိုင်၍ ကလေးနို့တိုက်နေသည်ကို
ကြည့်ကောင်းကောင်းနှင့်ကြည့်နေလိုက်ပါသည်။ ကြည့်နေရင်း ကလေး မစို့သော နို့မှ နို့ရည်များ တစက်ပြီးတစက်ကျလာသည်ကို တွေ့လိုက်ရသောအခါ ဦးမင်း
မောင်က သူ့လက်ဖြင့် နို့သီးခေါင်းလေးအောက်တွင်ခံ၍ ရလာသော နို့ရည်များကို သောက်လိုက်ပါသည်။
“ဟင်း..ဟင်း.. ဆရာကြီးက မဆာသေးဘူးဆို ခုဆာနေပြီလား”
“ငါဆာတာက ထမင်းမဟုတ်ဘူးဟ၊ နို့ဆာတာ”
“ဟင်း ဟင်း ဟင်း သိပါတယ်၊ အဲဒါကြောင့် ဆရာကြီးက ရုတ်တယက်ကြီး အလုပ်ရှာပြီး အားလုံးကို ပ ထုတ်လိုက်တာ မို့လား။”
“အေးပေါ့၊ ကဲ ပြောနေကြာပါတယ်။ ငါ့ကို နို့တိုက်ပါဦး”
ဦးမင်းမောင်က ပြောပြောဆိုဆို မိတူးမာ၏ ပေါင်တဘက်ပေါ်တွင် ခေါင်းအုံးအိပ်လိုက်ပြီး လွတ်နေသော နို့တဘက် ကို စို့လိုက်ပါတော့သည်။ ထွက်လာသမျသော
နို့များကို ကလေးလိုပင် တဂွတ်ဂွတ် မြိုချနေသည်ကို မိတူးမာက ပြုံးကြည့်နေပါသည်။ ဦးမင်းမောင်က မိတူးမာ၏ နို့ကိုစို့ရင်း လက်တဘက်က မိတူးမာ၏တင်ပါး
ကို သိုင်း ဖက်၍ တင်ပါးကို ပွတ်ပေးနေလိုက်ပါသည်။ ခနနေသောအခါ မိတူးမါက
“ဆရာ ခနလေး၊ ကလေးအိပ်ပျော်သွားပြီ။ ပုခက်ပေါ်တင်လိုက်ဦးမယ်။”
“လုပ်၊ လုပ်၊ မြန်မြန်လုပ် ပြီးရင် ဒီကလေးကြီးကို ဆက်တိုက်ရဦမယ်။”
“ဟုတ်တယ်၊ မိတူးမာတို့က အမွှာမွေးထားတာကိုး ဟင်း ဟင်း ဟင်း....”
မိတူးမာက ကလေးကို ပုခက်ပေါ်တင်ပြီးသည်နှင့် ဦမင်းမောင်လှဲ အိပ်နေသော ဖျာပေါ်တွင် လာထိုင်လိုက်ပါ သည်။ ဦးမင်းမောင်က မိတူးမာကို ဆွဲလှဲလိုက်ပြီး အင်္ကျီကို လှန်တင်လိုက်ကာ နို့ဆက်စို့လိုက် ပြန်ပါသည်။ ဒီတခါတွင်တော့ နို့တဘက်ကို စို့၍ နောက်တဘက်ကို လက်ဖြင့်နယ်ပေးနေလိုက်ရာ မိတူးမာမှာ တ အင်း အင်း နှင့် ညည်းလာပါသည်။ ဦးမင်းမောင်က လက်ကို နို့နယ်နေရာမှ နေရာပြောင်းလိုက်ပြီး တင်ပါးကို ပွတ်ပေးလိုက် ပါသည်။ တင်ပါးကိုပွတ်နေရာမှ နောက်
ဘက်မှ မိတူးမာ၏ ဖင်ကြားထဲသို့ နှိုက်လိုက်ရာ မိတူးမာ၏ စောက်ဖုတ် ကြီး နှင့် သွားထိပါတော့သည်။ မိတူးမာကလည်း တွန့်ကနဲ တချက်ဖြစ်သွားပြီး ဦးမင်းမောင်
၏ နို့စို့ နေသော ခေါင်းကို ဆွဲဖက်ထားလိုက်ပါသည်။ ဦးမင်းမောင်က မိတူးမာ၏စောက်ဖုတ်ကို အထက်အောက် ဆွဲဆွဲ ပြီးပွတ် ပေးနေလိုက်ရာ မိတူးမာမှာ စောက်ဖုတ်ယားလာပြီး ဖင်ကြီးတခုလုံး တွန့်လန် တွန့်လန်ဖြစ်နေပါတော့ သည်။ ဦးမင်းမောင်က စောက်ဖုတ်အားပွတ်နေရင်း မိတူးမာ၏ ထမီကို မတင်လိုက်ရာ
မိတူးမာမှာ အောက်ပိုင်း ဖင် ပြောင်ကြီးဖြစ်သွားပြီး ဦးမင်းမောင်၏ လက်သည်လည်း မိတူးမာ စောက်ဖုတ်နှစ်ချမ်းကြားတွင် ရှေ့တိုးနောက် ငင် လှုပ်ရှားပေးနေရာ
စောက်ဖုတ်ကြီးတခုလုံးသည် ထွက်လာသော စောက်ရည်များကြောင့် ရွှဲရွှဲ စိုနေပါတော့ သည်။
ဦးမင်းမောင်က သူ့လက်ခလယ်ကို မိတူးမာစောက်ဖုတ်ထဲသို့ လက်နှစ်သစ်မျှ သွင်းလိုက်ပြီး သွင်းလိုက် ထုတ်လိုက်ဖြင့် လက်ဖြင့်လိုးပေးနေလိုက်ရာ မိတူးမာမှာ အရသာ ကောင်းကောင်းတွေ့နေပြီး ဖင်ကြီးကို ရှေ့ တိုးနောက်ဆုိလုပ်ရင်း ဦးမင်းမောင်၏ ခေါင်းကို သူ့နို့နှင့် အတင်းဆွဲကပ်ထားပါသည်။ ဦးမင်းမောင်က နို့စို့ခြင်း
ကို ခန ရပ်လိုက်ပြီး မိတူးမာကို ပက်လက်တွန်းလှန်လိုက်ပြီး မိတူးမာ၏ ဗိုက်ကို လျှာနှင့် ယက်ရင်း တဖြေးဖြေး အောက်ဘက်သို့ ဆင်းလာလိုက်ပါသည်။ ဆီးခုံပေါ်
သို့ရောက်သောအခါ မိတူးမာ၏ စောက်မွှေးများကြားတွင် လျှာဖြင့် ဟိုထိုးဒီထိုးလျှောက်ကလိနေပါသည်။ လက် ကတော့ စောက်ဖုတ်ကို ဆက်လက်လိုးပေးနေရင်း လက်ခလယ်တချောင်းထဲ သွင်းနေရာမှ လက်ညှိုးပါထပ်သွင်းလိုက်ပါသည်။ လက်ကို အဆက်မပြတ် လှုပ်ရှား နေရင်း ဦးမင်းမောင်၏ ပါးစပ်သည် မိတူးမာ၏ စောက်စိပေါ်သို့ရောက်လာပါတော့သည်။ စောက်မွှေးကြားထဲကလိနေရာမှ စောက်စိကို လျှာဖျားလေးဖြင့် ခပ်လိုက် စုပ်လိုက်လုပ်ပေးနေလိုက်ရာ မိတူးမာမှာ “အိ........ အိ....... အီး...... အီး...... ရှီး...... ရှီး.... အ.....အ.....ရှီး....ရှီး...အား..... ”
စသဖြင့် အသံမျိုးစုံ မြည်နေပါတော့သည်။ သူမ၏ စောက်ဖုတ်မှ လည်း စောက်ရည်များမှာ တပွက်ပွက် ထွက် ကျနေပြီး ဦးမင်းမောင်၏ လက်ဖ၀ါးထဲမှ အပြင်ဘက်
သို့ စီးကျနေပါတော့သည်။ ခနမျှ အကြာတွင်တော့ မိတူးမာ၏ တကိုယ်လုံးသည် တဆတ်ဆတ် တုံတက်လာပြီး သူမ၏ဖင်ကြီးမှာလည်း လေထဲသို့ကြွတက်လာ လိုက်ဆတ်ကနဲပြန်ကျသွားလိုက်ဖြစ်နေပြီး ပါးစပ်မှ
“အား.....အား.....အား.... အ...အ...အား......အား.....” ဟု
သံစုံမြည်လျှက် တချီပြီးသွားပါတော့သည်။ တချီပြီးသွားသည်နှင့် မိတူးမာသည် ဦးမင်းမောင်၏ လက်ကို သူမ၏ စောက်ဖုတ်ထဲမှ အတင်းဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး
ဦးမင်းမောင်နှင့်ဝေးရာဘက်သို့ စောင်းလိုက်ပြီး ကွေးကွေးလေး အိပ် လျှက် အသက်ကို ပြင်းပြင်းရှူရင်း ခန္ခာကိုယ်တခုလုံး တဆတ်ဆတ် တုံနေပါတော့သည်။
ဦးမင်းမောင်သည် မိတူးမာ ပြီးသွားသည်ကို ကြည့်ကောင်းကောင်းနှင့် ထိုင်ကြည့်နေလိုက်ရင်း သူ့လက်ကတော့ သူ့လီးကို ဆုပ်ကိုင်လျှက် ဖြေးညှင်းစွာ ဂွင်းတိုက်
နေလိုက်ပါသည်။ မိတူမာ အနည်းငယ် ငြိမ်သက်သွားသော အခါမှ ဦးမင်းမောင် က မိတူးမာ၏ တင်ပါးကို ဖြေးညှင်းစွာ ပွတ်သတ်ပေးရင်း မိတူးမာကို သူ့ဘက်သို့ ဆွဲလှည့် လိုက်ပါသည်။ မိတူးမာက ရီဝေသော မျက်လုံးများဖြင့် ဦးမင်းမောင်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီး
“ဘယ်လို လုပ်လိုက်တာလည်းဆရာကြီးရယ်၊ ကောင်းလိုက်တာ၊ မိတူးမာ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။”
“အန်မယ် နင့်ယောင်္ကျားကရော နင့်ကို ဒါမျိုး မလုပ်ပေးဘူးလား”
“လုပ်ပေးပေမဲ့ သူက ခန ဘဲ လုပ်ပေးတာ၊ ပြီးတဲ့ အထိ တခါမှ လုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ ခနလောက်ယက်ပြီးရင် အပေါ်တက်တော့တာဘဲ။”
“မောင်ငယ်က နင့်ကို နေ့တိုင်းလုပ်လား ”
“အာ၊ ဆရာကြီးကလည်း၊ နေ့တိုင်း ဘယ် က မလည်း၊ အချိန်ရတိုင်းလုပ်နေတာ။ ကိုမောင်ငယ်က တအားလုပ် တာ ဆရာကြီးရ။”
“ဟီး.ဟီး..ဟီး…ဆရာကြီးကလည်း ကြိုက်တာပေါ့၊ ကောင်းတာကိုး။”
“ကဲ၊ ကဲ၊ ငါ့ကိုလည်းပေးလုပ်ဦး။ ငါလည်း အရမ်းလိုချင်နေပြီ။”
“သိပါတယ် ကြည့်ပါလား ဆရာကြီး ဟာကြီး က ထောင်နေလိုက်တာ နဲနဲနောနောကြီး မဟုတ်ဘူး။”
“ငါ့ဟာနဲ့ နင့်လင် ဟာ ဘယ်ဟာက ပိုကြီးလဲ။ ”
“အင်….ဆရာကြီးဟာက အရမ်းတုတ်တယ်။ ကိုမောင်ငယ့်ဟာက နဲနဲသွယ်ပြီး ဆရာကြီးဟာထက်နဲနဲတော့ ပိုရှည်မယ်ထင်တာဘဲ။”
ဦးမင်းမောင်သည် ပြောပြောဆိုဆို မိတူးမာ၏ စောက်ဖုတ်ကို သူ့လက်ဖ၀ါးဖြင့် ပွတ်ဆွဲလိုက်ပြီး တဆက်ထဲ သူ့ဘက်သို့ဆွဲလှည့်လိုက်လေသည်။ ပြီးနောက် မိတူးမာ
၏ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ထောင်လိုက်ပြီး သူက ပေါင်ကြားတွင်နေရာယူလိုက်သည်။ မိတူးမာကလည်း သူမ၏ပေါင်နှစ်ချောင်းကို လက်နှစ်ဘက်ဖြင့် ဆွဲထား ပေးလိုက်
ရာ သူမ၏ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ဦးမင်းမောင်၏ လီးကြီးကို လက်ခံရန် အဆင်သင့်ဖြစ်၍ သွားလေတော့ သည်။ ဦးမင်းမောင်က မိတူးမာပေါင်ကြားတွင် ဒူးကို ကား၍ ထောက်လိုက်ပြီး သူ၏လီးကို လက်တဘက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ပြီး မိတူးမာ၏ စောက်ဖုတ်ဝတွင် တေ့လိုက်လေသည်။ ပြီးနောက် ဖြေးဖြေးချင်း ဖိသွင်းလိုက်ရာ မိတူးမာ
က အသက်ရှူအောင့်ကာ အံကြိတ်၍ ခံနေလိုက်သည်။
“မဟုတ်ပါဘူး၊ ဆရာကြီးရဲ့၊ ရပါတယ်၊ နဲနဲ ကျပ်လို့ပါ။”
အ၀င် အနည်းငယ်ကျပ်သော်လည်း သူမ၏ စောက်ရည်များနှင့်ရွှဲနေပြီး ချွဲနေသဖြင့် ဦးမင်းမောင်၏ လီး တချောင်း လုံးသည် စောက်ခေါင်းအဆုံးထိ ၀င်သွားလေ
သည်။ လီးဆုံးတော့မှ မိတူးမာက အောင့်ထားသော အသက်ကိုရှူထုတ်လိုက်ပြီး ဦးမင်းမောင်ကိုပြုံးကြည့်လိုက်သည်။ ထိုအခါမှ ဦးမင်းမောင်က တဖြေးဖြေး စ လိုး ပါတော့သည်။ လိုးနေရင်းက စောက်ရည်များပိုထွက်လာရာ အနည်းငယ် ပို၍ သွက်သွက်လေး လိုးပေးနေလိုက် ပါသည်။ မောင်ငယ်က ကောင်းကောင်းလိုးပေးထား
သော စောက်ဖုတ်ကို သူက ပိုကောင်းအောင် မလိုးပေး နိုင်ပါက သိက္ခာကျစရာဖြစ်သဖြင့် ဦးမင်းမောင်မှာ သူ့စိတ်ကို ထိမ်းရင်း မှန်မှန်လိုးလိုက် သွက်သွက်လိုး
လိုက်နှင့် စိတ်တိုင်းကျလိုးနေပါတော့သည်။ မိတူးမာကလည်း နကိုကတည်းက အလိုးခံရတာ ကြိုက်သူဖြစ်သဖြင့် ဦးမင်းမောင်လိုးနေသမျှ သူမကလည်း အောက်မှ
ပြန်ကော့ကော့ပြီး စည်းချက်ညီညီ ခံနေပါသည်။ ဦးမင်းမောင်မှာ အိမ်မှ ဇနီးကို လိုးရာတွင်လည်း အနည်းဆုံး နာရီဝက်တော့ ကြာတတ်သည်ဖြစ်ရာ ဤတခါ တွင်
တော့ ကြာနိုင်သမျှကြာအောင် ထိမ်း၍ လိုးနေပေသည်။ အပေါ်မှ ဆောင့်လိုးနေရာမှ နဲနဲညောင်းလာသဖြင့် မိတူးမာကိုယ်ပေါ် ဖိပြီး လှေကြီးထိုးပုံစံတခါပြောင်းလိုး
လိုက်ပြန်ပါသည်။ လှေကြီးထိုးပုံစံ နှင့် အတော်ကြာကြာ လိုးပြီးနောက် လီးကို တပ်ရက်သား မိတူးမာကို ဖက်၍ အပေါ်ဘက်သို့ တင်လိုက်ပါသည်။ မိတူးမာက
လည်း သူ့အလှည့်ရောက်ပြီကို အလိုလို သိပြီး အပေါ်မှ ဆောင့်ပါတော့သည်။ ငယ်ရွယ်သူလည်းဖြစ် ထန်သူလည်း ဖြစ်လေရာ မိတူးမာသည် အပေါ်မှ ဖင်ကို ကြွကြွ
ပြီး လီးဆုံးကာနီးထိထုတ်ပြီးမှ အသားကုန် ပြန်ဖိဖိဆောင့် ချ လိုးနေပါတော့သည်။ မိတူးမာက သူ့စိတ်တိုင်းကျ မီးကုန်ယမ်းကုန် တဖုန်းဖုန်းတဖျောင်းဖျောင်း ဆောင့်နေရာ သူမ တကိုယ်လုံးလည်း ချွေးများရွှဲနစ်နေပါတော့သည်။ မိတူးမာစိတ်တိုင်းကျ အချိန်တော်တော်ကြာကြာ လိုးစေ ပြီးမှ ဦးမင်းနိုင်သည့် အပေါ်ဘက်သို့
နေရာပြန်ယူလိုက်ပါသည်။ ဒီတခါတွင်တော့ မိတူးမာ၏ ပေါင်တချောင်းကို ခွ၍ ဘေးတစောင်းပုံစံအတိုင်း ခွပြီး အသားကုန် တဖုန်းဖုန်းပြစ်ဆောင့်၍ လိုးပေးလိုက်
“အီ...အီး... အိ....အားးးးးးးး......အားးးးးး..အု. အ. အား....အား...ဆရာကြီးရေ လုပ်ပါ ..အသားကုန်လုပ်ပါ... ကောင်းလွန်းလို့ပါ... လုပ်ပါ ဆောင့်ပါ..အမလေး သေပါပြီ.... ကောင်းလိုက်တာ.. အား..အားး ကောင်းလိုက်တာ ဆရာကြီးရယ် ကောင်းလိုက်တာ အား။အား။” ဟု
အသားကုန် အော်နေပါတော့သည်။ ဦးမင်းမောင်လည်း စိတ်တိုင်းကျ ဆောင့်လိုးလိုက်ပြီး သူ့လရည်များကို မိတူးမာ စောက်ခေါင်းထဲတွင်ပန်းထုတ်ရင်း ပြီးလိုက်ပါ
တော့သည်။ ဤတခါတွင်တော့ ဦးမင်းမောင် စကားပင် မပြောနိုင်တော့ဘဲ ဟောဟဲလိုက်၍ မောနေပါတော့သည်။ သူ၏လီးကို မိတူးမာစောက်ခေါင်းထဲမှ ဆွဲထုတ်
ပြီး မိတူမာဘေးတွင်လှဲချ အမောဖြေနေ လိုက်ရပါသည်။
မိတူးမာမှာလည်း မောနေပြီး ဦးမင်းမောင်ကို ဖက်၍ နှစ်ယောက်သား အနားယူနေလိုက်ကြပါသည်။
နှစ်ယောက်သား အမောပြေမှ အချိန်ကို ကြည့်လိုက်ရာ နေ့လည် တနာရီ ထိုးနေသည်ကိုတွေ့ရလေသည်။ မိတူးမာက
“ဆရာကြီးလည်း ဆာရောပေါ့ မိတူးမာ ထမင်းခူးလိုက်တော့မယ်နော်”
“အေးအေး နင်လည်း အတူလာစားလေ၊ နှစ်ယောက်စာ တခါတည်းခူးလိုက်”
မောမော ဆာဆာနှင့် မိတူးမာပြင်ပေးသော ထမင်းကို အ၀စားလိုက်ပြီး ဦးမင်းမောင်သည် ခင်းထားသော ဖျာပေါ်တွင် ခန လှည်းလိုက်လေသည်။ မိတူးမာက အိုးခွက် ပန်းကန် များကို ဆေးကြောပြီး ဦးမင်းမောင် ဘေးသို့လာ၍ ထိုင်လိုက်သဖြင့် ဦးမင်းမောင်က ဆွဲလှဲလိုက်ပြီး ဖက်ထားလိုက်ပါသည်။
“နင်က တော်တော် တော်တာဘဲ၊ ပြောစမ်းပါဦး မောင်ငယ် အရင်ရော ရည်းစားတွေဘာတွေ ရှိတယ်မို့လား။”
“အာ။ ဆရာကြီးက မသိလို့၊ ကိုမောင်ငယ့် အရင် မိတူးမာ လင်တယောက်ရဘူးသေးတယ်။ ကွဲသွားတာ။ အဲဒီကောင်က အရက်သမား ကြက်သမား။ မိတူးမာဘဲ အလုပ်ပေါင်းစုံ လုပ်ပြီး ရှာကျွေးရတာ။ ပြီးတော့ လူကိုလည်း ရိုက်ချင်သေးတယ်။ ၂ နှစ်လောက်တော့ သည်းခံပြီးပေါင်းပါသေးတယ်။ နောက်တော့လည်း မခံနိုင်
“ဟီးဟီး၊ ဆရာကြီးကလည်း၊ အဲဒါကြောင့် ၂ နှစ်ခံတာပေါ့။ သူနဲ့မကွဲခင် ကိုမောင်ငယ်နဲ့တွေ့တာ။ ကိုမောင်ငယ်က မိတူးမာကို သနားပြီး ဒီကောင့်ကိုကွာလိုက်ရင် သူယူမယ်ဆိုလို့ မိတူးမာ သူ့ကို ကွာလိုက်တာ။”
“သူနဲ့ မကွာခင် မောင်ငယ့်ကိုကော နင်ပေးလိုးခဲ့သေးလား။”
“အင်းပေါ့၊ တော်ကြာ ကိုယ် နဲ့ရမှ ပန်းသေနေရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော့။”
“ဟားဟားဟား၊ ဟုတ်ပါ့ကွာ၊ အဲဒီတော့မှ မိတူးမာတို့ဒုက္ခရောက်မှာနော်။”
“မောင်ငယ်နဲ့ ရပြီးတော့ကော တခြားကောင်တွေနဲ့ လုပ်ဖြစ်သေးလား။”
“အင်၊ မလုပ်ဖြစ်ပါဘူးနော်၊ ခုမှ ဆရာကြီးတယောက်တည်းနဲ့ဘဲဖြစ်တာ။ ဒါတောင် မိတူးမာ ဘာဖြစ်သွားမှန်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် မသိတော့ဘူး။”
“ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး နင် ငါ့ကို သနားသွားလို့ဖြစ်မှာပေါ့”
“ကဲ၊ မိတူးမာရေ၊ ပြော၊ ဒီတခါ ဆရာကြီး မြို့ ကပြန်လာရင် နင့်အတွက်ဘာယူလာရမလည်း။”
“အောင်မယ်လေး မလုပ်ပါနဲ့ ဆရာကြီးရယ်။ ကိုမောင်ငယ် ရိပ်မိပြီး ပြသနာတွေတက်ကုန်ပါဦးမယ်။ မိတူးမာက ဆရာကြီးကို တခုခုလိုချင်လို့ခံတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။
သက်သက်ကို ခံချင်လို့ခံတာ။ တခုခု လိုချင်လို့ခံရင် ဖာ ဖြစ်သွားမှာပေါ့။”
“အေးပါ ကလေးရယ်။ ကောင်းပါပြီ၊ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။
ဦးမင်းမောင်တို့ နှစ်ယောက် အပူအပင်ကင်းကင်း အေးဆေးစွာတယောက်ကိုတယောက် ဖက်၍ စကားပြော နေခြင်းမှာ အကြောင်းရှိပေသည်။ ဤငါးကန်များရှိသော
ဧရိယာတွင် အပြင်လူ ကန်ဘောင်ပေါ် လျှောက်ခွင့်မရှိ ပါ။ လူစိမ်းလာလျှင်လည်း ကန်တွင်မွေးထားသော ခွေး ၃ ကောင်က အရင် ဟောင်၍ဆီးကြို ပါလိမ့်မည်။ ကိုယ့်ကန်မှလူများပြန်လာလျှင်လည်း ခွေးများက တဲအောက်မ ထ၍ ပြေးကြိုတတ်သောကြောင့် ဦးမင်းမောင် တို့မှာ အပူအပင် ကင်းစွာပင် နေချင်သလိုနေ နေကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဦးမင်းမောင်တို့လှဲနေစဉ် မိတူးမာ၏ ကလေးလေးမှာ သေးပေါက်ချ ပြီး နို့ဆာလာသဖြင့် နိုးလာပါတော့သည်။ မိတူမာက ကလေးကို
အနှီးလဲပေးပြီး ထိုင်၍နို့တိုက်နေလိုက်ရာ ဦးမင်းမောင်က ဘေးမှ နေ၍ သူမ၏ နို့လေးကို နယ်လိုက် ဖင်ကို ပွတ်လိုက်နှင့် လုပ်ချင်သလို လုပ်နေပါတော့သည်။
“ဆရာကြီးနော် ဆရာကြီး လျှောက်လုပ်နေတာနဲ့ မိတူးမာ နောက်တခါလိုချင်လာပြီနော်။“
“မပူပါနဲ့ဟာ၊ ကလေးနို့စို့ပြီးရင် နောက်တခါပေါ့။”
“အွန်၊ ဆရာကြီးက တကယ်ပြောတာလား။”
“ဟ၊ တကယ်ပြောတာပေါ့၊ ဘာလဲ နင်က ငါမနိုင်တော့ဘူးထင်လို့လား။”
“တကယ်ဆိုရင်လဲ ပြီးရော။ ကဲကလေးလဲ ၀ပြီ။ ခန အောက်ချထားလိုက်ဦးမယ်။”
မိတူးမာက ကလေးကို ဘေးမှာ အနှီးခင်းပြီး ချထားလိုက်ရာ ကလေးမှာ သူ့ဖာသာသူဆော့နေပါတော့သည်။
ကလေးကိစ္စပြီးသည်နှင့် ဦးမင်းမောင်က မိတူးမာကို ဖက်လိုက်ကာ နမ်းလိုက်ပါသည်။ အခုန တခါက လိုရင်းကို တိုက်ရိုက်ရောက်သွားသောကြောင့် ဖက်ရမ်း နမ်းရှုံ့ ခြင်းမလုပ်ဖြစ်လိုက်ပါ။ ဤတခါတွင်တော့ မိတူးမာကို ရင်ခွင်ထဲသွင်းပြီး မက်မက်မော နမ်းလိုက်ပါသည်။ မိတူးမာ၏ နှုပ်ခမ်းကို အကြာကြီးစုပ်နမ်းနေလိုက်
ရာ မိတူးမာ ကလည်း ပြန်နမ်းရင်း သူမ၏ လျှာကို ဦးမင်းမောင်၏ ပါးစပ်ထဲသို့ထိုးသွင်းလာပါသည်။ ဦးမင်းမောင်က ၀င်လာ သော လျှာကို ပြန်၍ စုပ်ပေးလိုက်ရာ မိတူးမာမှာ မျက်စေ့ကို မှိတ်၍ အရသာ ခံနေပါတော့သည်။ ဦးမင်းမောင်တို့နှစ်ယောက်မျာ အေးအေးဆေးဆေး သမီးရီးစားများသဖွယ် တယောက်ကိုတယောက် ကြင်နာစွာ နမ်းလိုက် စကားပြောလိုက်ဖြင့် လောက စည်းစိမ်ခံနေကြပါသည်။ နဘေးတွင်ဆော့နေသော ကလေးငယ်က လည်း သူ့အမေ၏ ဖေါက်ပြန်ရေးကားကို စောင့် ကြည့်ရင်း ပျင်းလာသည့်နှယ် အိပ်ပျော်သွားပါတော့သည်။
“ဆရာကြီး က ဆရာကြီး မိန်းမကိုလည်း နေ့တိုင်းလုပ်တာဘဲလား။”
“အေး၊ လုပ်တာပေါ့၊ ရာသီလာတဲ့အချိန်တောင်ရှောင်တာမဟုတ်ဘူးဟ။”
“ဆရာကြီး မိန်းမကလည်း ကြိုက်တယ်ထင်တယ်နော်၊ သူ လာလယ်တုံးက ကြည့်ရတာ တော်တော်ထန်မဲ့ပုံဘဲ။ နှုပ်ခမ်းမွှေးရေးရေးနဲ့ နော်။”
“အင်း ငါ့မိန်းမလဲ ထန်တော့ထန်ပါတယ်၊ နှုပ်ခမ်းမွှေးနဲ့တော့ ဆိုင်မဆိုင်တော့မသိဘူး၊ နင်ဆို နှုပ်ခမ်းမွှေးလည်း မရှိဘဲနဲ့ တော်တော်ထန်တာဘဲ ဟာ။”
“နှုပ်ခမ်းမွှေး ရှိတဲ့မိန်းမ က ပိုထန်တယ်လို့ပြောတယ်ဆရာကြီးရဲ့။”
“အေးလေ၊ ဟုတ်ချင်လဲ ဟုတ်မှာပေါ့။”
“ဆရာကြီးတို့ မြို့ မှာ က ဒီမှာလိုတော့ ဘယ်လွှတ်လပ်ပါ့မလဲနော်။ နေ့ခင်းဆို ကလေးတွေ ရှိရင် ဘယ်လုပ်လို့ ရပါ့မလည်း နော်။”
“ရတာပေါ့၊ ဘယ်အချိန်မဆိုလုပ်လို့ရအောင် ငါတို့က သီးသန့် အခန်း ဖွဲ့ထားတာ၊ တော်ရုံတန်ရုံဆို အပြင်က အသံတောင်မကြားရဘူး။ နောက်ပြီးတော့ ရေချိုးခန်း
က အိပ်ခန်းထဲမှာလေ။ အဲဒီတော့ လုပ်ပြီးရင် အသာလေး ရေဆေးပြီး ထွက်သွားလိုက်ရုံဘဲဟ။”
“အော် ဟုတ်လား၊ ကောင်းတာပေါ့။”
မိတူးမာက စကားပြောရင်းနှင့် ဦးမင်းမောင်၏ ပုဆိုးကို ခါးထိ မလိုက်ပြီး လီးကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး ဖြေးဖြေးလေး ပွတ်သပ်ပေးရင်နှင့် နယ်ပေးနေရာ ဦးမင်းမောင်၏ လီးကြီးသည်လည်း မာတောင်လာပါသည်။ ဦးမင်းမောင်က
“နင်ငါ့ဟာကြီးကို နဲနဲ စုပ်ပေးပါလား”
ပြောပြောဆိုဆို မိတူးမာက လှဲနေရာကထထိုင်လိုက်ပြီး ဦးမင်းမောင်၏ လီးကြီးကို ကုန်းစုပ်လိုက်ပါသည်။ မိတူးမာ သည် လီးကို လက်နှစ်ချောင်းဖြင့်ဆုပ်ကိုင်၍ အပေါ်အောက် ဂွင်းထုသကဲ့သို့ လုပ်ပေးနေရင်း လီးထိပ်ကွမ်းသီးလုံးကြီးကို သူမ၏ ပါးစပ်ထဲထည့်၍ မက်မက်မောမောပင် စုပ်နေပါတော့သည်။ သူမ စုပ်နေပုံက တာဝန်ကျေရုံမဟုတ်ဘဲ နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက် အားရပါးရ စုပ်ပေးနေချင်းဖြစ်သည်။ လျှာဖျားဖြင့်လည်း လီးထိပ်ကို ဖိဖိပြီးယက်ပေးနေရာ ဦးမင်းမောင်မှာကော့နေရပေ
သည်။ အတန်ကြာစုပ်ပေးနေရာ ဦးမင်းမောင်၏ လီးမှာ မာတောင့်လာပြီး လုံးဝ မထိမ်းနီုင်တော့ဘဲ ပြီးလုပြီးခင်ဖြစ်လာသဖြင့်
“ဟဲ့တော်တော့၊ တော်တော့၊ ငါပြီးသွားလိမ့်မယ် ” ဟု
ပြောကာ လီးကို သူမ၏ ပါးစပ်ထဲမှ ဆွဲထုတ်ရန်ကျိုးစားလိုက်ပါသည်။ သို့သော် မိတူးမာက လုံးအလွတ်မပေးပဲ အတင်း ဆွဲ၍ ဆက်စုပ်ပေးနေရာ ဦးမင်းမောင်မှာ လုံးဝ မထိမ်းနိုင်တော့ဘဲ မိတူးမာ ၏ ပါးစပ်ထဲတွင် သူ၏ လရည်များကို ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်ရပါတော့သည်။ ဦးမင်းမောင်၏ လရည်များ လုံးဝမကျန်တော့သည်အထိ
စုပ် လိုက် ပြီးမှ လရည်အားလုံးကို မိတူးမာသည် မျိုချလိုက်ပါတော့သည်။ ဦးမင်းမောင်က မီးတူးမာကို မယုံသလို ကြည့်နေရင်း မောလှိုက်နေပေသည်။ မိတူးမာက
“အဲတာ ခုနက ဆရာကြီး မိတူးမာကို ကောင်းကောင်းလုပ်ပေးလို့ကျေးဇူးပြန်ဆပ်တာ။”
“ကောင်းလိုက်တာဟာ၊ နင်ကတော့ ဆရာမကြီးဘဲ၊ တော်လိုက်တာ၊”
မိတူးမာသည် ဦးမင်းမောင်၏ အနည်းငယ်ပျော့ဖတ်ဖတ်ဖြစ်သွားသော လီးကို ဆက်မစုပ်တော့ဘဲ လက်ဖြင့် သာ အသာအရာ နယ်နေလိုက်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့နယ်
နေရာ သိပ်မကြာမီတွင်ပင် ဦးမင်းမောင်၏ လီးကြီး မှာ မူလက ကဲ့သို့ ပြန်လည်၍ ဒင်ပြည့် ကျပ်ပြည့် တောင်လာပါတော့သည်။ မိတူးမာက တောင်မတ်နေ သော
လီးကို တခါ ထပ်၍စုပ်ပြန်လေသည်။ ဦးမင်းမောင်ကလည်း အားကျမခံ မိတူးမာ၏ ဖင်ကြီးကို သူ့မျက်နှာဘက်သို့ဆွဲယူ လိုက် ပြီး သူ့ ခေါင်းပေါ် ခွစေလိုက်ပါသည်။
သူတို့နှစ်ယောက်မှာ 69 ပုံစံ ဖြစ်သွားပြီး ဦးမင်းမောင်က အောက်မှ မိတူးမာ က အပေါ်မှဖြစ်နေပါသည်။ ဤပုံစံအတိုင်း မိတူးမာကလည်း ဦးမင်းမောင်၏ လီးကို အားရပါးရစုပ်နေ သလို ဦးမင်းမောင်ကလည်း မိတူးမာ၏ စောက်ဖုတ်ကြီးကို ပယ်ပယ်နယ်ယက်နေပါတော့သည်။ နှစ်ယောက်သား ယက်ရင်း စုပ်ရင်းနှင့် အချိန် အတော်ကြာလာသောအခါ မိတူးမာက လီးစုပ်ချင်းကို ရပ်လိုက်ပြီး ထလိုက်ပါသညိ။ ထို့နောက် ဦးမင်းမောင်ပေါ် ခွလိုက်ပြီး ဦးမင်းမောင်၏ လီးကြီး ကို ကိုင်လျှက် သူမ၏ စောက် ဖုတ်နှင့် တေ့လိုက်ပြီး ထိုင်ချလိုက်ပါတော့သည်။ ဦးမင်းမောင်၏လီးကြီးလည်း စောက်ရည်များ တံတွေး များဖြင့် ရွှဲနေသော မိတူးမာ၏စောက်ဖုတ်
ထဲသို့လျှောကနဲ ၀င်သွားပါတော့သည်။ အဆုံးထိဝင်သွားပြီးသောအခါ မိတူးမာသည် ပထမအကြိမ်တုံးကကဲ့သို့ အသားကုန် မဆောင့်သေးဘဲ လီးကို တဆုံးထည့်
ထားပြီး ညောင့်နေပါ တော့သည်။ မျက်စေ့ကို စုံမှိတ်ပြီး ဖင်ကို ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်ညောင့်နေရင်း တ အင်းအင်း နှင့် အရသာခံ နေပါသည်။ ဦးမင်းမောင်ကလည်း သူမလုပ်ချင်သလို လုပ်ခွင့်ပေးထားလိုက်ပြီး သူ့လီး ကြီး သူမ စောက်ဖုတ် ထဲတွင် ပြည့်ကျပ်နေပြီး စောက်ဖုတ်နံရံက သူ့လီးတချောင်းလုံးကို ညှစ်ကစား နေ သည်ကို ကောင်းကောင်းကြီး အရသာ ခံနေလိုက်ပါသည်။ မိတူးမာက ဖြေးဖြေးလေး ညောင့်နေရာမှ အသွင်ပြောင်းပြီး ဖင်ကို ကြွကြွပြီး လိုး ပါတော့သည်။ သူလိုး
နေပုံက အရှိန်နှေးလိုက် မြန်လိုက်၊ တခါ ဖြေးဖြေးဆောင့်လိုက် အား နှင့် တဖုံးဖုံးဆောင့် လိုက်နှင့် လီးတချောင်းလုံးကို သူမ စိတ်တိုင်းကျ လိုးနေပါတော့သည်။ ဤတခါတွင်တော့ မိတူးမာက ဦးမင်းမောင် ကို ပုံစံပြောင်းခွင့်လုံးဝမပေးဘဲ သူမကသာ ဦးဆောင်၍ သူမ စိတ်တိုင်းကျ လိုးနေပါ တော့သည်။ ဦးမင်းမောင်မှာ
လည်း အရင်ကတည်းက အောက်မှနေရလျှင် တော်တော်နှင့် မပြီးတတ်သူဖြစ်ရာ မိတူးမာမှာ ပွဲတော်ကြီး နှင့် တွေ့နေရပါတော့သည်။ မိတူးမာမှာ လိုးရင်း လိုးရင်းနှင့် တော်ချင် သလိုဖြစ်လာသော အခါမှ ဦးမင်းမောင် ပြီးနိုင်ရန် အပေါ်မှ အသားကုန် တဖုံးဖုံးဆောင့်ပါတော့သည်။ သူမ ဘယ်လို ဆောင့်ဆောင့်
ဦးမင်းမောင်က မပြီးနိုင်တော့သဖြင့် မိတူးမာမှာ ချွေးတလုံးလုံးနှင့် မောဟိုက်နေပါ တော့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်တော့ ဦးမင်းမောင်က သူမကို အတင်း အောက်
ဘက်သို့ပို့လိုက်ပြီး တပေါင်ကျော် ကပ်ကျေး ကိုက် တက်ခွကာ မီးကုန်ယမ်းကုန် တဖုံးဖုံးလိုးလိုက်တော့မှ စောက်ခေါင်းထဲသို့လရည်များ ပန်းထွက် သွားပြီး ပြီးသွားပါတော့သည်။ မိတူးမာလည်း ဤတခါတွင်တော့မျော့မျော့လေးသာ ကျန်တော့ပြီး အသက်ကို ပြင်းစွာ ရှူ၍ စကားတခွန်းမှ မပြောနိုင်တော့ဘဲ ပက်လက်က
လေးလှဲနေလိုက်ပါသည်။ ဦးမင်းမောင်မှာလည်း မိတူးမာ ဘေးတွင် လှဲရင်း အမောဖြေနေလိုက်ပါတော့သည်။ တော်တော်ကြာကြာ အနားယူပြီးမှ မိတူးမာသည် ထ လိုက်ပြီး ရေချိုးရန် ကန်ထဲသို့ဆင်းသွားပါသည်။ ဦးမင်းမောင်လည်း သူမနောက်သို့လိုက်ဆင်းလိုက်ပြီး ရေချိုး လိုက်ပါသည်။ ရေချိုးပြီးသောအခါ မိတူးမာက ရေနွေးတည်ပြီး ဦးမင်းမောင်အား ကော်ဖီမစ် တခွက်ဖျော် တိုက် ပြီး သူတို့နှစ်ယောက်လိုးခဲ့သောနေရာကို ရေစို အ၀တ်ဖြင့်တိုက်နေပါသည်။ တဲတခုလုံးလည်း လရည် နံ့ နှင့် စောက်ရည် အနံ့တို့ဖြင့် မွှန်ထူနေပါသည်။ မိတူးမာဘယ်လိုတိုက်တိုက် အနံ့က မပျောက်နိုင်သဖြင့် ဦးမင်းမောင် က ဒီဇယ်နှင့် တိုက်ခိုင်းလိုက်သော
အခါမှ အနံ့ ပျောက်ပါတော့သည်။ အချိန်ကလည်း ညနေ ၅ နာရီ ကျော်နေ ပြီဖြစ်ရာ ၀ါးသွားတိုက်သူများ လည်း ပြန်ရောက်ခါနီးပြီဖြစ်၍ မိတူးမာက အားလုံးအ
တွက် ညနေစာကို ချက်ပြုတ် နေလိုက်ပါသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်သည်လည်း အ၀တ်အစား အပြည့်အစုံဝတ် ၍ ဘာမှ မဖြစ်သကဲ့ သို့ ကျန်သူ များပြန်အလာကို
စောင့်နေလိုက်ကြပါသည်။ ညနေ ၆ နာရီ ကျော်ပြီး မှောင်ကာနီးမှ ဦးမြကြီးတို့ အားလုံးပြန် ရောက်လာကြပါသည်။ ဦးမင်းမောင်က ပါလာသောဝါးများကို လှေပေါ်
တွင်ပင် ထားခိုင်းလိုက်ပြီး မနက်မှ ဆက် လုပ်ရန် ပြောပြီး အားလုံးအား ထမင်း စားခိုင်းလိုက်ပါသည်။ ထမင်းစားပြီးကြသောအခါ အားလုံး သည် မောမော နှင့် အလျှိုအလျှို မိမိတဲသို့ မိမိပြန်သွားကြပါတော့သည်။ မိတူးမာလည်း ကလေးပိုက်ပြီး မောင်ငယ် နောက်သို့ လိုက်ပါသွားပါတော့သည်။ နေ့ခင်းက အရှိန်နှင့် ဦးမင်းမောင်လည်း စောစော အိပ်ပျော် သွားပါတော့သည်။
မနက် ဦးမင်းမောင် အိပ်ယာမှ နိုးသောအခါ အလုပ်သမားများမှာ ငါးစာ ကျွေးပြီးနေပြီး မနေ့က တိုက်လာသော ၀ါးများကို လှေပေါ်မှ ကန်ဘောင်ပေါ်သို့တင်နေကြ
ပါသည်။ နေ့လည် ထမင်းစားချိန်ကျမှသာ အလုပ်အားလုံးပြီး သွားပါတော့သည်။ အလုပ်ပြီးသွားသောအခါ ထမင်းစားလွှတ်လိုက်ပြီး ဦးမင်းနိုင်လည်း ကိုမြကြီးတို့တဲ
တွင် ထမင်း စားရင်း နောက်နေ့များတွင် ရှေ့ဆက်လုပ်ရမည့် အလုပ်များအကြောင်းကိုဆွေးနွေး နေ လိုက်ပါသည်။
နေ့လည် ခန အနားယူကြပြီးသောအခါ အလုပ်သမားအားလုံး အလုပ်ပြန်စရန် ရောက်လာကြပါတော့သည်။ ဦးမင်းမောင်က သူတို့အားလုံးကို ဘေးကန်ှ ငါးဖေါ်
နေရာသို့ သွားကူရန်လွှတ်လိုက်ပါသည်။ ငါးကန်များတွင် ဤကဲ့သို့ပင် သူ့ကန် ကိုယ်ကူ ကိုယ့်ကန် သူကူနှင့် နေကြရပါသည်။ သူတို့အားလုံးထွက်သွားသောအခါ
ဦးမင်းမောင်က ကန်ကို လျှောက်ပတ်ကြည့်သလိုလိုနှင့် ဒေါ်ကျော့တို့တဲဘက်သို့အရင်သွားလိုက်ပါသည်။ ဒေါ်ကျော့က
“ဟုတ်တယ်ဗျ၊ မနက်ဖန် ပြန်မှာဆိုတော့ လမ်းလေးလဲလျှောက်ရင်း ဘာတွေလုပ်စရာရှိသေးလဲလို့ လိုက်ကြည့်နေတာ”
“မပူပါနဲ့ ဆရာကြီးရယ်။ ကိုမြက ဒီကန်ကို သူ့ကန်လိုစောင့်ရှောက်တာပါ။”
“ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ ကျနော်လည်း လျှောက်သာ ကြည့်နေတာပါ၊ ပြောစရာဘာမှ မရှိပါဘူး။”
ဒေါ်ကျော့နှင့် အ လာပ သ လာပ ပြောပြီး ရှေ့ ကန်ကို ဆက်ပတ်လိုက်ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မိတူးမာ ထံသွားပြီး အခြေအနေပေးပါက တချီလောက်ဆွဲ
ရန်ဖြစ်ပါသည်။ မိတူးမာ အကြောင်းကို စဉ်းစား လိုက်သည်နှင့် လီးက တောင်လာပါသည်။ ကြည့်မည့်သူလည်းမရှိတော့ တောင်နေသောလီးကို ဒီအတိုင်း လွှတ်ထားလိုက်ပြီး ဆက်လျှောက်ခဲ့ပါသည်။ မိတူးမာတို့တဲနားရောက်လာသောအခါ မည်သည့်အသံမှ မကြားရ၍ ရှိမှ ရှိရဲ့လား တော်ကြာ ကလေးပိုက်ပြီး ဟင်းစားလေးများ ရ မလားလို့ ဟိုဘက်ကန်လိုက်သွား ရင်တော့ ဒုက္ခပါဘဲဟု တွေး နေမိရင်း မိတူမာတို့တဲရှေ့ ရောက်လာပါသည်။ တဲထဲသို့ ငုံ့ကြည့်လိုက်သော
အခါ ပုခက်ထဲတွင် ကလေးကို တွေ့ ရ ပြီး ဘေးမှ ဖျာပေါ်တွင်မိတူးမာတယောက် ထမီရင်လျှားနှင့် လှဲအိပ် နေသည် ကိုတွေ့ရပါသည်။ ဦးမင်းမောင်လည်း တဲပေါ်သို့
တက်လိုက်ရာ ငြိမ့်ကနဲဖြစ်သွားသဖြင့် မိတူးမာခေါင်းထောင်ကြည့်ပါသည်။
“ကိုကျော်ဌေးတို့ကန် ငါးဖေါ်ကူ လွှတ်လိုက်တယ်။ ဟင်းစားရတာပေါ့ဟာ။”
“အင်၊ ဆရာကြီးကလည်း မသိရင်ခက်မယ်၊ ဟိုကရလာမဲ့ ဟင်းစားထက် ဆရာကြီး ဟင်းစားရဘို့လွှတ်လိုက်တာ မို့လား။”
“ဒီကောင်မလေးက တော်တော် တော်တာဘဲ။ မပြောဘဲနဲ့ကို သိနေတယ်နော်။”
“သိတာပေါ့၊ မြွေမြွေချင်းခြေမြင်တယ်လေ ဆရာကြီးရဲ့၊ ဟီးဟီး၊”
ဦးမင်းမောင်လည်း မိတူးမာ ဘေးဝင်ထိုင်လိုက်ပြီး တခါထဲ ထမီထဲလက်ထည့်ပြီး မိတူးမာ၏စောက်ဖုတ်ကို တန်း နှိုက်လိုက်ပါသည်။
“ဟာ နှင့်ဟာကြီးကလည်း ရွှဲနေပါလား။ နင်ဘာတွေစဉ်းစားနေတာလည်း”
“အာ၊ ဆရာကြီးကလည်း ဘာမှစဉ်းစားနေလို့မဟုတ်ဘူး။ ကိုမောင်ငယ် ထမင်းစားပြီးတချီလုပ်သွားလို့ သူ့အရည်တွေနဲ့ ရွှဲနေတာ။ နေဦး။ ရေဆေးလိုက်ဦးမယ်။”
“နေပစေ၊ မဆေးနဲ့၊ ငါဒီအတိုင်းဆက်လိုးမယ်။ ငါက တခါတခါ သူများလိုးပြီးကာစ စောက်ဖုတ်ကြီးကိုလိုးကြည့် ချင်နေတာ နဲ့ အတော်ဘဲ။ ”
ဦးမင်းမောင်သည် မိတူးမာ၏ ထမီကို ဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး စောက်ရည်များ လရည်များနှင့် ရွှဲနေသော စောက်ဖုတ် ကြီးကို ပွတ်ပေးလိုက်လေသည်။ ပြီးနောက် အချိန် သိပ်မဖြုံးတော့ဘဲ မိတူးမာ၏ ပေါင်ကို ဆွဲမလိုက်ပြီး ကား လိုက်လေသည်။ ထို့နောက် အောက်နားတွင် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လိုက်ပြီး တောင်မတ်နေသော သူ၏
လီးကြီးဖြင့် စောက်ဖုတ်ထဲသို့ ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ မောင်ငယ်လိုးထား၍ ချောနေသော စောက်ဖုတ်ကြီးထဲသို့ ဦးမင်းမောင် ၏ လီးကြီးမှာ အတားအဆီး မရှိ ရှောကနဲ ၀င်သွားပါတော့သည်။ ဦးမင်းမောင်သည်လည်း ရသည့်အချိန်လေး တွင်လိုးရသညိဖြစ်ရာ မနေ့ကကဲ့သို့ အချိန်ဆွဲလိုးမနေတော့ဘဲ၊ စ သည်နှင့် တဖုံးဖုံး
တဒိုင်းဒိုင်းဆောင့်ပါ တော့ သည်။ မိတူးမာ၏ စောက်ဖုတ်ကလည်း ရွှဲရွှဲစိုနေရာ ဆောင့်လိုးရသည်မှာ ပိုသွက်နေပါတော့သည်။ ဦးမင်းမောင်က မိတူးမာ၏ ခြေနှစ
်ချောင်းကို ပုခုံးပေါ်တွင် ထမ်းတင်လိုက်ကာ ကိုယ်လုံးကို ကိုင်းလိုက်ပြီး လက် နှစ်ဘက်ကို မိတူးမာ၏ လည်ပင်းတဘက်တချက်ဘေးတွင် ထောက်ထားလိုက်ပြီး အားကုန်ဆောင့်ပါ တော့ သည်။ မိတူးမာမှာလည်း ကိုယ်လုံးက လုံးဝခေါက်ချိုးချိုး ထားသလိုဖြစ်နေပြီး လီးကြီးက သားအိမ်ဝ ထိ လာထိ နေပြီး တဒုတ်ဒုတ်နှင့် ထိနေသလိုခံစားနေ၇ပါသည်။ ဤပုံစံမျိုးနှင့် တဆက်ထဲ အချက် ၂၀၀ ခန့် မနားတန်း အသားကုန်ဆောင့်လိုးလိုက်ရာ မိတူးမာလည်း တသက်စာ ရသွားပြီး ဦးမင်းမောင်လည်း မိတူးမာ စောက်ဖုတ် ထဲတွင် လရည်များ ပန်းထုတ်ရင်းပြီးသွားပါတော့သည်။ ပြီးသွားသည်နှင့် ဦးမင်းမောင်သည် တဲထဲတွင် အချိန် ဖြုံးမနေ
တော့ဘဲ တဲပြင်သို့ အမြန်ထွက်လိုက်ပါသည်။ မိတူးမာကတော့ လူနှစ်ယောက် တဆက်ထဲ အလိုးခံ လိုက်ရ၍ အကျေနပ်ကြီးကျေနပ်ကာ မောမော ကောင်းကောင်း
ဦးမင်းမောင်လည်း ဒူးချောင်ချောင်နှင့်ပင် မိမိတဲသို့ ပြန်လာလိုက်ပြီး မောမောနှင့် အိပ်လိုက်ပါတော့သည်။
ညနေ ၃ နာရီခန့်တွင် အလုပ်သမားများ အားလုံးပြန်ရောက်လာကြသည်။ သူတို့ရောက်သည့်အချိန်တွင် ဟိုဘက်ကန် ၌ အလုပ်များပြီးနေပြီဖြစ်သဖြင့် ပြန်လာခဲ့ကြ
ခြင်းဖြစ်သည်။ ကန်သို့ပြန်ရောက်သောအခါ အစာတိုင် ထပ်တိုးသည့်အလုပ်ကို ခန လုပ်လိုက်ပြီး အလုပ်သိမ်းလိုက်ကြလေသည်။ ညပိုင်းတွင် တီဗွီမှ ဘော်လုံးပွဲပြ
သဖြင့် ဘော်လုံးပွဲ သရဲများဖြစ်သော မောင်ငယ်နှင့် အခြားနှစ်ယောက်မှာ ဘောလုံးပွဲ ကြည့်ရန် အားခဲနေကြလေသည်။ ၈ နာရီ သတင်းပြီးမှ ဘော်လုံးပွဲကလာခြင်း
ဖြစ်သည်။ ဦးမြကြီးက ဦးမင်းမောင်ကို အားနာနေသော်လည်း ဦးမင်းမောင် က
“ရတယ် ကြည့်ကြ၊ ငါလည်း နေ့လည်က တရေးတမော အိပ်ထားလို့ မအိပ်ချင်ပါဘူး” ဟု ပြောထားရ၏။
ဦးမင်းမောင်မှာ ဘော်လုံးပွဲကို မကြည့်ရမနေနိုင် ၀ါသနာပါသူမဟုတ်ပေ။ ကြုံရင်တော့လည်း ကြည့်လိုက်တတ် ၏။ ည ၉ နာရီခန့်တွင် မိတူးမာက ကလေးကောက်
“ကဲ၊ ကိုမောင်ငယ်၊ ကျုပ်တော့ သွားတော့မယ်၊ အိပ်ငိုက်နေပြီ၊ တော် ဘောပွဲပြီးမှဘဲ ပြန်လာခဲ့တော့ ” ဆို၍ သူမတို့၏တဲသို့ပြန်ရန် ဆင်းလေတော့သည်။ ဦးမင်းမောင်က
“အေး၊ ကောင်မလေး ဓါတ်မီးပါတယ်မို့လား ကလေးတဘက်နဲ့ လမ်းသေသေချာချာ ကြည့်သွားနော်”
“ဦးမြကြီး၊ ကျနော့ဓါတ်မီးတွေ့ မိသလား၊ ကျနော် အိမ်သာ သွားမလို့”
“ဓါတ်မီးက ဒီမှာ ဆရာကြီး၊ မောင် ငယ်၊ မင်း အိမ်သာ ရေရော ဖြည့်ထားရဲ့လား။”
ဦးမင်းမောင်လဲ အိမ်သာဖက်ကို ခပ်သုတ်သုတ် ထွက်ခဲ့ပါသည်။ အိမ်သာကို တဲနှင့် အတော်လှမ်းလှမ်း ကန် ဘောင်ပေါ်တွင် ကန်ဘောင် အပြင်ဘက်ချမ်း၌ ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဦးမင်းမောင် အပြေးတပိုင်း ခပ်သုတ်သုတ်လိုက်သော အခါ အိမ်သာ ကျော်ကျော်လေးတွင် မိတူးမာကို မီလာလေသည်။ ဦးမင်းမောင်
ပြေး လိုက်လာသည်ကို တွေ့သဖြင့် မိတူးမာက ရပ်စောင့်နေလေသည်။ မိတူးမာအနားသို့ရောက်သောအခါ
“ငါက နင့်နောက်လိုက်လာတာဟ၊ မောင်ငယ်တို့ ဘော်လုံးပွဲကြည့်နေတုံး တချီလောက်ဆွဲမလားလို့”
“ဆရာကြီးကလဲ လွန်လွန်းပါတယ်၊ နေ့ခင်းကလည်း တချီ၊ အသားကုန်ဆွဲပြီးပြီလေ၊”
“ငါက နက်ဖန်ပြန်မှာဆိုတော့ ရသလောက်ထပ်ဆွဲလိုက်ဦးမယ်လေဟာ။ နောက်ပြီး နင့်ကို ဆွဲရတာ မ၀သေးဘူးဟ။”
“တဲက အဝေးကြီးကို ဆရာကြီး အရမ်းကြာနေရင် သူတို့စိတ်ပူပြီးလိုက်လာကြလိမ့်မယ် ဆရာကြီးရဲ့။”
“အာ၊ နင်ကလည်း တဲထိမသွားပါဘူး၊ ဒီမှာတင်လုပ်မှာ။”
“အန်၊ ဘယ်မှာလဲ၊ ဒီကန်ဘောင်ပေါ်တင်လား”
“အေးပေါ့၊ ကဲ ပြောနေကြာတယ်။ ကလေး ကို ဟိုဘက် မြေညီရာချလိုက်။ ပြီးနင်က ဒီနားလာ”
မိတူးမာ ကလေးကို အောက်ချလိုက်တော့ ဦးမင်းမောင်က သူ့ကို ငှက်ပြောပင်အုပ်နားဆွဲခေါ်သွားပြီး
“ကဲနင်က ဒီ ငှက်ပြောပင် ကိုင်ပြီး ဖင်ကုန်းထား ”
ဟုဆိုလိုက်ပါသည်။ မိတူးမာက ငှက်ပျောပင်ကို လက်နှစ်ဘက်နှင့် ကိုင်လိုက်ပြီး ခါးကို ကော့ပေးထားလိုက် ပါသည်။ ဦးမင်းမောင်က မိတူးမာ၏ ထမီကို ခါးပေါ်
လှန်တင်လိုက်ရာ အောက်တွင် ဘာမှ ခံမ၀တ်ထားသော မိတူးမာ၏ ဖင်ပြောင်ကြီးပေါ်လာပါတော့သည်။ ညက လ မသာသဖြင့် တော်တော်မှောင်ရာ ကြယ်ရောင
်ဖြင့်သာ ရေးရေးလေးမြင်ရပါသည်။ ဦးမင်းမောင်သည် မိတူးမာ၏ စောက်ဖုတ်ကြီးကို နောက်မှ စမ်းကြည့်လိုက်ရာ ခြောက်နေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့် ငုတ်တုတ်
ထိုင်ချလိုက်ပြီး မိတူးမာ၏စောက်ဖုတ်ကြီးကို ကုန်းယက်လိုက်ပါ သည်။ စောက်ဖုတ်တခုလုံးစိုရွှဲလာသည်အထိယက်လိုက်ပြီး တံတွေးများကို သူ၏လျှာဖြင့် စောက်ဖုတ်ထဲဝင် အောင် တွန်းတင်ပေးလိုက်ပါသည်။ စောက်ဖုတ်ယက်နေရလျှင် မရပ်ချင်သော ဦးမင်းမောင်မှာ အချိန်မရ သောကြောင့် ဆက်ယက်နေချင်စိတ်
ကို ထိမ်းလိုက်ပြီး မတ်တတ်ရပ်လိုက်ပါသည်။ ထို့နောက် သူ၏ပုဆိုးကို မလိုက်ပြီး လည်ပင်းတွင် နောက်ပြန်ချထားလိုက်ပါသည်။ ပြီးနောက် လက်ဖ၀ါးပေါ် တံတွေးထွေးချပြီး သူ၏လီးကြီးကို တံတွေးဆွပ်လိုက်ကာ မိတူးမာ၏စောက်ဖုတ်ထဲသို့ တခါထဲ ထိုးသွင်းလိုက် ပါတော့သည်။ သူ၏တံတွေးများနှင့်ရော မိတူးမာက
လည်း ခံချင်လာပြီးဖြစ်သဖြင့် ထွက်လာသောစောက်ရည်များနှင့်ရော မိတူးမာ၏စောက်ဖုတ်မှာ ချောနေပြီဖြစ်သဖြင့် ရှောရှောရှူရှူ ပင် ၀င်သွားပါတော့သည်။
ဦးမင်းမောင်သည် မနေ့က သူ့ကို မိတူးမာက လီးနဲနဲတိုသည်ဟုပြောထားသဖြင့် စိတ်ထဲတွင် တေးထားခဲ့ရာ နောက်မှ ဆောင့်လိုး သောအခါတွင် သားအိမ်ခေါင်း
ကို စောင့်မိပြီး ဒုတ်ကနဲ ဖြစ်သွားသောကြောင့် ပျော်သွားပြီး မညှာမတာပင် တဖုံးဖုံးဆောင့် ၍ လိုးပါတော့သည်။ မိတူးမာကလည်း တချက်ဆောင့်လိုက်တိုင်း အင့်
ကနဲ အင့်ကနဲ ဖြစ်သာ သွားသည် သူက ဖြုံတောင်မဖြုံဘဲ သူ၏ဖင်ကြီးကို ဦးမင်းမောင် ဆောင့်ချက်နှင့်အညီ ပြန်၍ ကော့ ကော့ ထိုးပေးနေလိုက်ပါသေးသည်။
ဦးမင်းမောင်၏ဆောင့်အားကြောင့် ရှေ့သို့ရောက်ရောက်သွားရာ မိတူးမာမှာ ငှက်ပျောပင်ကို လက်နှင့် ထောက်မထားနိုင်တော့ဘဲ ပုခုံးနှင့် ထောက်ထားပြီး လက်ဖြင့် ဖက်ထားလိုက်ရ ပါ သည်။ ညအချိန်ဖြစ်သဖြင့် အသံကို လွယ်လွယ်ကြားနိုင်သောကြောင့် မိတူးမာမှာ မအော်မိစေရန် တော်တော် သတိထားနေရပေ
သည်။ သားအိမ်ခေါင်းကို တခါဆောင့်တိုင်း အားကနဲအားကနဲ ဖွင့်အော်လိုက်ချင်သော် လည်း အသံကြားမည်ဆိုးသဖြင့် ထိမ်းထားရရာ “အု ” ကနဲ ”အိ” ကနဲ “အင့်” ကနဲသာ အသံထွက်နေပါသည်။ မောင်နိုင်တို့က တီဗွီကြည့်နေရာ တီဗွီသံကြောင့် တခြားအသံကို တော်ရုံတန်ရုံ နှင့် မကြားနိုင်သဖြင့် ဦးမင်းမောင် ကတော့
အချိန်နှင့် နေရာကြောင့် ပုံစံပြောင်းလိုးရန်လည်း မဖြစ်နိုင်သလို အကြာကြီးဆွဲလိုးရန်လည်း မဖြစ်နိုင်သဖြင့် အချိန်တိုတို အတွင်းမှာ ရှိသမျအားကုန်သုံး၍ မညှာ
မတာဆောင့်ဆောင့်လိုးနေတော့ရာ မိတူးမာမှာလည်း ထိထိမိမိရှိပြီးကောင်းလွန်းလှသဖြင့်
“အား.. အမလေး၊ ဆရာကြီးရေ၊ ကောင်းလှချီလား၊ အား၊ အိ၊ အင့် ကောင်းတယ် ဆရာကြီးရ..ဲ့၊ အမေရေ၊ ကောင်းလိုက်တာ။ သေတော့မှာဘဲ။ အား ကောင်းတယ်။
ကောင်းတယ်၊ ဆောင့်။ ဆောင့်၊ ဆောင့်ပါ ဆရာကြီးရယ်။ အသားကုန်ဆောင့်ပါ။ အား…အား…အားးး ပြီးတော့မယ်ဆရာကြီးရေ၊ အား..အား…..အား…. ပြီးပြီ ၊ အား ပြီးပြီ၊ အား ကောင်းလိုက်တာ၊ ကောင်းလိုက်တာ ” ဟု ပါးစပ်က တတွတ်တွတ် ရွတ်ရင်း ပြီးသွား ပါတော့သည်။ မိတူးမာ၏ အသံနှင့်ပင် ဦးမင်းမောင်မှာ ပို၍ ဖီလင် တွေတက်လာပြီး မိတူးမာပြီးပြီး ခြင်းမှာပင် သူလည်း လရည်များကို စောက်ဖုတ်ထဲပန်းထုတ်ရင်း ပြီးလိုက် ပါ တော့သည်။ သူ့လီးကြီးအား မိတူးမာ စောက်ဖုတ်ထဲမှ ဆွဲထုတ်လိုက်သည်နှင့် မိတူးမာလည်း ဒူးညွတ်ပြီး ငှက်ပျောပင်ကို ဖက်၍ ထိုင်ချလိုက် ရပါတော့သည်။ ဦးမင်းမောင်လည်း လုံချည်ကိုပြန်ဝတ်ပြီး မိတူးမာဘေးတွင် မြေကြီးပေါ်ထိုင်ချလိုက်ပြီး အမောဖြေနေလိုက်ပါ
တော့သည်။ မိတူးမာ၏ ကလေးလေး ကတော့ သူ့အမေ ၏ ဖေါက်ပြန်ရေးဇာတ်လမ်းကို မသိချင်ရောင်ဆောင်၍ ကန်ဘောင်ပေါ်တွင် အိပ်ကောင်းကောင်းနှင့် ဆက်အိပ် နေပါသည်။
နောက်နေ့ မနက်စောစော ရေတက်ချိန်တွင် ဦးမင်းမောင်တယောက် အိမ်ပြန်ခဲ့တော့သည်။ အပြန်လမ်းတလမ်းလုံး မိတူးမာကိုလိုးခဲ့ရပုံများကို စားမြုံ့ ပြန်ရင်း သင်္ဘောပေါ်တွင် စိတ်က ထလာပြန်သည်။ အိမ်ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း အိမ်မှ ဇနီးချောကို တန်းလိုးရန် အားခဲထားလိုက်သည်။ ယခင်ကလည်း ဤသို့ပင် ငါးကန်မှပြန်သောနေ့ဆိုလျှင် အိမ်ရောက်ရောက်ချင်း တချီဆွဲနေကျဖြစ်သည်။ ဇနီးချောကလည်း အထူးပြော စရာမလို အဆင်သင့်ပြင်ထားပြီးသား။ ဦးမင်းမောင်
ထက် ၁၀ နှစ်ခန့် ငယ်သူဖြစ်ပြီး မိတူးမာပြောသလိုပင် နှုပ်ခမ်းမွှေးရေးရေးနှင့် ထန်လည်းအတော်ထန်သူဖြစ်ရာ ငါးရက်ခန့် လီးနှင့်ဝေးနေသဖြင့် အတော်လိုချင်နေ လောက်ပြီဖြစ်သည်။ ဦးမင်းမောင် အိမ်ရောက်မည့် အချိန်သည် မနက် ၁၁ နာရီလောက်ဖြစ်ရာ ကလေးများ လည်း ကျောင်းသွားကုန်ပြီး အိမ်တွင်လူရှင်းချိန်လည်း
ဖြစ်သည်။ ၁၀ နှစ်ကျော်ကျော် တယောက်တည်းကိုသာ လိုးခဲ့ရာမှ မိတူးမာအား ၂ ရက်သာ လိုးလိုက်ရသည် အိမ်မှ မိန်းမကို တအားသတိရပြီး တအားကျုံးချင်
နေမိ သည်။ သင်္ဘော ဆိပ်ကမ်းကပ်သည်နှင့် ကားမငှားမီ အိမ်ကို ဖုံးဆက်လိုက်သည်။
” မိန်းမရေ၊ မောင် ပြန်လာနေပြီနော်၊ အဆင်သင့်ပြင်ထား ”
“ မပူနဲ့မောင် သူများက အဆင်သင့်ဖြစ်နေတာ ၃ ရက်ရှိပြီ ”
ဦးမင်းမောင်တို့အိမ်သည် ၃၅ လမ်းထဲရှိ ကန်ထရိုက်တိုက်ဖြစ်သည်။ ဦးမင်းမောင်တို့ နေသည်မှာ ၃ လွှာတွင် ဖြစ်သည်။ ဦးမင်းမောင် အိမ်ရှေ့တွင် ကားဆိုက်သည်
နှင့် ၀ရန်တာတွင် ထွက်ကြည့်နေသော ဖြူဖြူဖွှေးဖွှေး ရေဆေးငါးကြီးကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ ကသောကမျောပင်အိမ်ပေါ်သို့တက်ခဲ့ရာ တံခါးရှေ့ အရောက်တွင် တံခါးက အနည်းငယ် ဟ နေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့် တွန်းဝင်လိုက်သည်။
ရေဆေးငါးကြီးမှာ အိမ်ရှေ့ ဆိုဖာပေါ်တွင် ပေါင်တချောင်း ထောင် တချောင်းကိုအောက်ချ၍ ထိုင်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရလေသည်။ ကိုယ်ပေါ်တွင် အ၀တ်အစား
ကလုံးဝမရှိ၊ မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်း။ ကလေးသုံးယောက် မွေးထားသဖြင့် ဗိုက်ကလေးကတော့ အနည်းငယ်ပူချင်သည်။ လူကလည်း အရမ်းမ၀သော်လည်း
ပြည့်ပြည့် ဖြိုးဖြိုးဖြစ်သည်။ အသားက ဖြူစွပ်နေရသည့် အထဲ စောက်မွှေးကိုပြောင်အောင်ရိတ်ထားရာ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ဖောင်းမို့နေပြီး စောက်ဖုတ်နှုပ်ခမ်းနှစ်လွှာ
ကြားတွင် စောက်စိကြီးမှာ ပြူးထွက်နေသည်။ ဦးမင်းမောင်က တံခါး ကိုစောင့်ပိတ်လိုက်ပြီး ဆိုဖာဆီသို့ အပြေးတပိုင်းသွားလိုက်ပြီး ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လိုက်သည်။ စကားတခွန်းမှ မပြောဖြစ်ဘဲ မသူဇာ၏ ခြေနှစ်ချောင်းကို ကောက်မလိုက်ပြီး သူ့နှာခေါင်းကို မသူဇာ့စောက်ဖုတ် ကြားထဲထည့် ပြီး အသက်ကို ပြင်းပြင်းရှိုက်ရှူလိုက်
“ အား…. မိန်းမရာ ဒီစောက်ဖုတ်ကြီးကို လွမ်းလိုက်ရတာကွာ..”
ပြောပြောဆိုဆိုပင် ဦးမင်းမောင်သည် မသူဇာ့စောက်ဖုတ်ကို တရှုံ့ ရှုံ့ နမ်းလိုက် လျှာဖြင့် စောက်ဖုတ်တခုလုံး အား တပြတ်ပြတ် ယက်လိုက်လုပ်နေတော့သည်။ မသူဇာသည်လည်း မခံစားရတာ ကြာပြီဖြစ်သော ဦးမင်းမောင်၏ လျှာအရသာကို ကောင်းကောင်းကြီး ခံနေရရာ ပါးစပ်မှ “အင်း…အင်း…..အင်း…” .နှင့် ညည်းနေ
သလို တကိုယ်လုံးလည်း တွန့်ရွနေလေသည်။ ဦးမင်းမောင်သည် စောက်ဖုတ်ယက်ခြင်းကို ခေတ္တ ရပ်လိုက်ပြီး ထိုင်ရာမှ ထလိုက်သည်။ ပြီးနောက် သူ၏ အ၀တ်အ
စားများကို အလျှင်အမြန်ချွတ်ပြစ်လိုက်လေ သည်။ ထို့နောက် မသူဇာ၏ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ဆွဲကိုင်ပြီး ဆိုဖာလက်တန်းဘက်သို့ ဆွဲမတင်လိုက်ရာ မသူဇာ
၏ ပုခုံးနှင့် ခေါင်းမှာ အောက်ဖက် သို့ဆိုက်သွားပြီး တင်ပါးမှာလက်တန်းပေါ်သို့တင်လျှက် စောက်ဖုတ် ကြီး မိုးမျှော်သွားလေသည်။ ဦးမင်းမောင်သည် မသူဇာ၏ ခြေနှစ်ချောင်းကိုဖြဲလိုက်ပြီး မတ်တတ်ကပင် ကုန်း လျှက် မသူဇာ၏ စောက်ဖုတ်ကို အားရပါးရ ယက်လေတော့သည်။ ခနနေသောအခါ ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီး စောက်ဖုတ်ထဲသို့ လျှာကို ၀င်သလောက် ထိုးသွင်းပြီး လျှာနှင့်လိုးပေးနေလေသည်။ ဤသို့ လျှာနှင့်လိုးနေရာမှ စောက်စိအား စုတ်လိုက် စအိုဝအားယက်လိုက်လုပ်
ပေးနေပြန်ရာ မသူဇာမှာ တအားအားနှင့် ကော့လန်နေပေ တော့သည်။ တော်တော်ကြာကြာ အားရအောင်ယက်ပြီးမှ တဖန်မတ်တတ်ရပ်လိုက်ပြီး သူ၏ တောင်မတ်
နေ သော လီးကြီးကို ကိုင်၍ မသူဇာ၏ စောက်ဖုတ်ဝတွင်တေ့လိုက်သည်။ ပြီးသူ့လီးကြီးဖြင့် မသူဇာ၏ စောက်ဖုတ် အကွဲကြောင်းတလျှောက်ပွတ်ဆွဲပေးလိုက် စောက်စိအား ဖိပွတ်ပေးလိုက်လုပ်နေရာ မသူဇာမှာ
“အား... မောင်ရေ၊ ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ၊ လိုးပါတော့၊ မောင့်လီးကြီးကို ထိုးထည့်လိုက်ပါတော့၊ သူဇာမနေနိုင်တော့ပါဘူး။ အား..ရှီး....ရှီး... မောင်ရေ၊ လိုးပါ၊ လိုးပါ၊ လိုးလိုက်ပါတော့” ဟုအော်နေလေတော့သည်။ ထိုအခါမှ ဦးမင်းမောင်က သူ့လီးကို မသူဇာစောက်ဖုတ်ထဲသို့ တခါတည်း တဆုံး သွင်းလိုက်လေတော့သည်။ ဦးမင်းမောင်၏ လီးကြီး စောက်ခေါင်းထဲတွင် ဒုတ်ကနဲဖြစ်သွားသည်နှင့် မသူဇာမှာ အားကနဲအော်ပြီး ထွန့်ထွန့် လူးသွားလေသည်။ ပြီးနောက် ဦးမင်းမောင်၏စောင့်ချက်နှင့်အညီ သူမ၏ ခါးကို ကော့ကော့ပေးကာ ဆိုဖာကို လက်သီးဆုပ်ဖြင့် တဖုံးဖုံးထုနေတော့သည်။ တလမ်းလုံး တောင်လာသောလီးကို အတိုးချပြီး ဦးမင်းမောင်မှာ မသူဇာအား မီးကုန်ယမ်းကုန် တဖုံးဖုံးစောင့်လိုးနေလေရာ မသူဇာမှာလည်း ရေငတ် တုံးရေတွင်းထဲကျသကဲ့သို့ စိတ်ပါလက်ပါပင် ခံနေလေတော့သည်။ ဤကဲ့သို့အတန်ကြာ
လိုးပြီးသောအခါ ဦးမင်းမောင်သည် ပြီးချင်လာလေသည်။ မသူဇာ မ၀သေးသည်ကို သတိ ထားမိသဖြင့် ဦးမင်းမောင်က သူ့လီးအား မသူဇာစောက်ဖုတ်ထဲမှ ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် လိုက် ကာ မသူဇာ၏ စောက်ဖုတ်ကြီး အား ပြန်ယက်ပြန်တော့သည်။ ဤတခါတွင်တော့ စောက်စိကိုသာ ဦးစား ပေးပြီးဖိ
ယက်ပေးနေရာ မသူဇာမှာ တကိုယ်လုံးတုန်တက်လာပြီး ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ ဖြစ်ကာ တချီပြီးသွား လေသည်။ မသူဇာမှာ တချီလောက်ပြီး ယုံနှင့် ကျေနပ်တတ်
သူမဟုတ်သဖြင့် ဦးမင်းမောင်သည် ဆိုဖာပေါ် တွင်ပက်လက်အိပ်လိုက်ပြီး မသူဇာကို အပေါ် ဆွဲတင်လိုက်လေသည်။ မသူဇာကလည်း အလှည့်ကျလျှင် မနွဲ့တတ်
သူဖြစ်ရာ ဦးမင်းမောင်ကိုယ်လုံးကို ခွလိုက် ပြီး ဦးမင်းမောင်၏ လီးကြီးကို သူမလက်နှင့်ဆုပ်ကိုင်ပြီး သူမ၏ စောက်ဖုတ်ဝသို့ တေ့၍ ထိုင်ချလိုက်လေသည်။ စောက်
ခေါင်းထဲသို့ လီးတချောင်းလုံးဝင်သွားသောအခါ ဖိထိုင်ထားလိုက်ပြီး မွှေ့ပေးနေလိုက်သည်။ ခနမွှေ့ပေးပြီးနောက်မှ ဦးမင်းမောင်၏ ပုခုံးကို အားယူ၍ ကိုင်လိုက်ပြီး သူ့ဖင်ကြီးကို လီးတဆုံးကြွကာ ပြန်ဆောင့် သွင်းလိုက်လေသည်။ ဤသို့ဆောင့်လိုးရသည်ကို သဘောတွေ့သွား သည့်အလား မသူဇာသည် ဖင်ကိုကြွလိုက် ဖိဆောင့်ချလိုက်နှင့် တဖုံးဖုံးဆောင့်လိုးလေတော့သည်။ ဦးမင်းမောင်သည် ကိုယ်ကမဆောင့်ရလျှင် မပြီးတတ် သူဖြစ်ရာ မသူဇာမှာ သူမစိတ်တိုင်းကျ မီးကုန်ယမ်း
ကုန် ဆောင့်ဆောင့်လိုးရင်း ပါးစပ်မှ “အီး. အား အီး အား...” နှင့် အော်နေလေတော့သည်။ မသူဇာသည် အချိန် တော်တော်ကြာကြာ လိုးပြီး တကိုယ်လုံး ချွေးများ နှင့်ရွှဲနေပြီး မောဟိုက်လာသောအခါမှ ဦးမင်းမောင်က မသူဇာ့ကို အသာအောက်ဘက်ပို့လိုက်ပြီး သူက အပေါ်မှ တဖန် ပြန်ဆောင့်လိုးပြန်တော့သည်။ ဤတကြိမ်တွင်တော့ မသူဇာလည်း ၀နေပြီဖြစ်သဖြင့် ဦးမင်းမောင်မှာ လုံးဝ မထိမ်းတော့ဘဲ အားရှိသလောက် အကုန်ဆောင့်ကာ ပြီးလိုက်လေတော့သည်။
စိတ်ထဲမှလည်း “ မိတူးမာဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း မိသူဇာကိုတော့ မမှီပါဘူးကွယ် ” ဟုတွေးနေမိလေ တော့သည်။
မေမိုးတစ်ယောက် မောပန်းနွမ်းလျခြင်း၊ ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း၊ မကျေနပ်ခြင်းများစွာတို့ဖြင့် ဝတ်စားထားသော အဝတ်များကိုပင်မလဲနိုင်တော့ပဲ အိပ်ယာပေါ် သို့လှဲ
ချလိုက်ပါတယ်။မျက်ရည်တစ်ချို့က ပါးပြင်ပေါ်ကို အလိုလိုစီးဆင်းကျလာတာမို့ သုတ်တောင်မသုတ်တော့ပဲ ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ ခေါင်းအုံးပေါ်ကို မျက်နှာအပ်လိုက်ကာ ငိုချလိုက်ပါတော့တယ်။အကြောင်းကတော့…..
ငယ်ငယ်လေးကတည်းက အခုမေမိုး ဆယ်တန်းရောက်တဲ့အထိ ညီအစ်မနှစ်ယောက်တခန်းထဲ အတူ တူအိပ်နေလာခဲ့ကြတာ။ဒီညကစလို့ သူတို့ညီအစ်မအိပ်တဲ့
အခန်းလေးကိုပါပေးလိုက်ရတာမို့ မေမိုးတစ်ယောက် ခြေရင်းဖက်ကအခန်းကိုပြောင်းပေးလိုက်ရပြီး တစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်စွာ ဖြတ်သန်းရတော့မှာကြောင့် အားငယ်စိတ်တွေဖြစ်နေပါတယ်။
မမကတော့ သူ့ချစ်သူရင်ခွင်မှာ ပျော်နေရချိန်တွေမှာ မေမိုးကတော့ တစ်ယောက်တည်း ဖြတ်သန်းရ တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်လည်း မေမိုးရင်ခွင်ထဲကနေ မမကိုဆွဲ
ထုတ်သွားတဲ့ မမချစ်သူ ကိုသက်ကို မေမိုး စိတ်ထဲက အလိုလိုမုန်းတီးနေမိပါတယ်။အစ်မနဲ့ ပတ်သက်လို့ အစ်ကိုတော်ရမှာဖြစ်ပေမယ့် မေမိုးတစ်ယောက် အမုန်း
တရားတွေကြောင့် အစ်ကိုတစ်ယောက်လို ဘယ်လိုမှလက်ခံလို့မရဖြစ်နေပါတယ်။
မမတို့က ဘယ်လောက်တောင်ပိရိကြသလဲဆိုရင် မေမိုးတစ်စွန်းတစ်စလောက်တောင်မရိပ်မိလိုက်ပါ ဘူး။တက္ကသိုလ်မှာကတည်းက ချစ်သူတွေဖြစ်လာကြပြီး ဘွဲ့
ရတော့မှ လူကြီးစုံရာနဲ့လာရောက်တောင်းရမ်း ကာ ကမန်းကတန်း လက်ထပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မမတို့ လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့အချိန် မေမိုး
တစ်ယောက် မမရင်ခွင်ထဲမျက်နှာအပ်ကာ ငိုကြွေးခဲ့ရပါတယ်။မမကိုတော့ အားနာပါတယ်။သူ့ချစ်သူနဲ့ ပေါင်းရမှာမို့ ပျော်နေတဲ့အချိန် မေမိုးကြောင့် သူတို့အပျော်
အားရအောင်ငိုပြီးတဲ့နောက် မေမိုးအဝတ်အစားလဲကာ အခန်းပြင်ထွက်လာတော့ သူတို့လင်မယား ခန်းမကနေပြန်လာကြပါတယ်။အပေါင်းအသင်းတွေ တရုန်း
ရုန်း စကြ နောက်ကြနဲ့မမတစ်ယောက် ခေါင်းလေးတောင်မဖော်နိုင်လောက်အောင် ရှက်နေတုန်း သူကတော့အောင်ပွဲခံတဲ့မျက်နှာနဲ့ အားလုံးကို နှုတ်ဆက် ပြီး
နောက် သူတို့မင်္ဂလာအခန်းထဲကို မမခါးလေးကိုဖက်ကာဝင်သွားကြတာကို မေမိုးတစ်ယောက် ဆွေးမြည့်စွာ ကြည့်လိုက်ကာ ခေါင်းငိုက်စိုက်ချလို့ အခန်းထဲဝင်လိုက်
နောက်တော့ ကိုယ့်ဖာသာအားတင်းကာ စာကျက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်း စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ကောက်ကိုင်လိုက်ကာ စာကျက်နေလိုက်ပါတယ်။စိတ်ထဲကသာ
တိုးတိုးလေးကျက်နေတာ စာထဲလဲစိတ်က သိပ်တော့မရောက်ပါဘူး။စိတ်မကောင်းစရာ အကြောင်းတွေကိုပဲပြန်တွေးမိနေတော့ မကြာမကြာ စာအုပ်ကို ကိုင်ထား
ဘာလဲဟ ဘုန်းတွေနိမ့်တော့မှာပဲဆိုတာ ဟိုလူကဘာတွေများ မမကိုလုပ်နေလို့လဲ၊စူးစမ်းချင်စိတ်တွေ နဲ့ အခန်းနံရံ ဖိုင်ဘာပြားကိုနားကပ်ကာ နားထောင်နေမိ
‘အို..ကိုကလည်း အရမ်းဆိုးတယ်ကွာ..ဟင့်..ဟင့်..ရှီး..’ အသံကတော့ တော်တော်လေးကိုတိုးပေမယ့် မေမိုးကတော့ သေချာနားထောင်နေတာမို့ ရှင်းရှင်းလင်း
လင်းကို ကြားနေရပါတယ်။ဘာတွေဘယ်လိုလုပ်လို့ မမတစ်ယောက်ဒီလိုအသံတွေထွက်နေရတာလဲ။ဒိုင်းခနဲ ရင်ခုန်သံနဲ့အတူ ဘာတွေဖြစ်နေကြလဲဆိုတာကိုလည်း
သိလို မြင်လိုနေပါပြီ။အပျိုဖော်ဝင်စအရွယ် ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်နဲ့ ကာမကိစ္စတွေကိုစူးစမ်းလေ့လာတတ်တဲ့ အရွယ်ဆိုတော့လည်း ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သိပ်
မေမိုးတစ်ယောက်သိချင်စိတ်တွေများလာလို့ ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတာ ဘေးဘီကိုလေ့လာလိုက် တော့ အခန်းနံရံအပေါ်ဆုံးမှာ ခြင်ဇကာရိုက်ထားပေမယ့်
အလုံတော့မဟုတ်ဘူး။ဘီတင်ပြားလေးတွေနဲ့သာ ရိုက်ထားတာမို့ အဲဒီကနေဆိုတွေ့ရလောက်တယ်။ဒါပေမယ့် နည်းနည်းမြင့်နေတော့ ခဏတော့စဥ်းစားလိုက် တယ်။အော် ဒါများလွယ်လွယ်လေးပဲ။ကုလားထိုင်ကို စာကြည့်စားပွဲပေါ်ကိုတင်လိုက်ပြီး အဲဒီအပေါ်ကိုတက် ကြည့်လိုက်ရင်တွေ့ရပြီပေါ့။
ဒါကြောင့်မေမိုးလည်း အချိန်မဆိုင်းပဲ ခုတင်ပေါ်ကနေအသာလေးဆင်းလာကာ ကုလားထိုင်ကို စားပွဲပေါ်ကို အသာလေးအသံမထွက်အောင်တင်လိုက်ပါတယ်။
တစ်ဖက်ခန်းကအတွဲက မသိနိုင်ပေမယ့် မဟုတ်တာလုပ်နေတဲ့ မေမိုးကတော့ တစ်သက်လုံးတစ်ခါမှမဖြစ်ဖူးတဲ့ ရင်ခုန်သံတွေနဲ့ တော်တော်လေးကိုသတိ ထားကာ လုပ်နေရပါတယ်။တစ်ဖက်ခန်းမှာ မီးလင်းနေတော့ ငါ့မျက်နှာကြီးများ တွေ့သွားမလားလို့တောင် မဆီမဆိုင်တွေးပူနေသေးတယ်။ဒါကြောင့် ကိုယ့်အခန်းကမီးခလုတ်
နောက်တော့ ခုတင်ပေါ်ကိုပြန်တက် ခုတင်ပေါ်ကနေ စားပွဲပေါ်ကို အသံမမြည်အောင်တက်လိုက်ရင်း နံရံကို အသာလေးထိန်းကိုင်ကာ ကုလားထိုင်ပေါ်ကိုတက်
လိုက်ပါတယ်။ဒူးတွေတောင်တဆတ်ဆတ်တုန်လာ ပါတယ်။အခုနေများ ဟိုဖက်ခန်းကသိသွားရင် မနက်ရောက်လို့ မျက်နှာဘယ်လိုထားရမှန်းတောင်မသိပါဘူး။
မေမိုးအစ်မ မေစိုးတစ်ယောက်ခုတင်ပေါ်မှာ အဝတ်အစားမဲ့လို့ပက်လက်လေးလန်နေပါတယ်။ သူ့ယောင်္ကျားကတော့ မမစိုးပေါင်ကြားထဲခေါင်းဝင်နေတာကိုတွေ့
မမစိုးကိုကြည့်လိုက်တော့ ပေါင်လေးနှစ်လုံးကိုကားပေးထားရင်း လက်နှစ်ဖက်ကသူ့ယောင်္ကျားခေါင်း ကိုစုံကိုင်ထားကာ ပါးစပ်လေးဟလို့ အသက်ကိုတောင်မ
နည်းလုကာရှူနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။တစ်ချက် တစ်ချက်ခါးလေးကိုလည်း ကော့ကာ ကော့ကာပေးနေတာမို့သူလည်း ခံစားမှုတွေအထွတ်အထိပ်ရောက်နေ တယ်ဆိုတာလည်း ခန့်မှန်းမိပါတယ်။
အစပိုင်းတော့ ချောင်းပြီးအသာလေးပြန်ဆင်းတော့မလို့ပါပဲ။ဒါပေမယ့်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းက ဘယ်လိုမှမခွာနိုင်အောင်ဖြစ်နေတာမို့ မေမိုးတစ်ယောက်ဘာတွေ
ဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ဆက် ကြည့်နေပါတယ်။ရင်တွေကလည်းတဒိုင်းဒိုင်းခုန်နေကာ အာခေါင်တွေပါခြောက်လာပါတယ်။ဒူးတွေပါတဆတ် ဆတ်
တုန်လာတာမို့ ပြုတ်မကျသွားအောင် မနည်းကိုထိန်းထားရပါတယ်။
ကြည့်နေရင်းပဲ မမစိုးတစ်ယောက် အိပ်ယာပေါ်ကနေခါးလေးကြွတက်လာကာ သူ့လင်တော်မောင် ခေါင်းကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဖက်ထားလိုက်ရင်း ခါးလေးကအိပ်
ယာပေါ်ကိုပြန်ပြုတ်ကျသွားတာကို တွေ့လိုက်ရ ပါတယ်။နောက်တော့ သူ့ယောင်္ကျား ကိုသက်ရဲ့ခေါင်းကို အတင်းဆွဲကာ ကိုသက်နှုတ်ခမ်းတွေကို အငမ်းမရ နမ်း
နောက်တော့ ကိုသက်လည်းလုံခြည်ကိုဆွဲချွတ်ချလိုက်ပါတယ်။ငေါက်ခနဲထွက်လာတဲ့ ကိုသက်ရဲ့လီး ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတော့ မေမိုးရင်ထဲရှိန်းခနဲဖြစ်သွားပါတယ်။
မေမိုးလည်း ဆက်ကြည့်နေတုန်း ကိုသက်က မမစိုးပေါင်ကြားထဲဝင်ထိုင်လိုက်ရင်း သူ့လီးကြီးနဲ့ မမစိုးအဝလေးကိုတေ့ကာ ဖြည်းဖြည်းလေးသွင်းလိုက်ပါတယ်
‘အ…ကို…ဖြည်းဖြည်း’ လို့ပြောလိုက်ကာ မမစိုးတစ်ယောက် ပါးစပ်လေးဟပြီးခေါင်းလေးပါမော့သွား ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကိုသက်ဟာကြီးက မမစိုးအပေါက်
ထဲကိုဝင်သွားတော့ မမစိုးတစ်ယောက် ကိုသက် ရင်ဘတ်ကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့တွန်းထားတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။မေမိုးတစ်ယောက် ကြည့်နေရင်းနဲ့ မမစိုးနေ ရာမှာ ငါသာဆိုရင် ဒီလောက်ကြီးတဲ့ဟာကြီးနဲ့ဆို ငါ့ဟာလေးတော့ကွဲသွားမှာပဲ ဆန့်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုကာ လက်ကဘောင်းဘီပေါ်ကို အလိုလိုရောက်သွားပါတယ်။
မေမိုးလည်း ကိုယ့်ဖာသာကိုစိတ်ထဲကနေရေရွတ်လိုက်ပြီး နည်းနည်းလေးပွတ်လိုက်မိတော့ တစ်ခါမှ မခံစားဖူးသေးတဲ့ အရသာထူးတစ်ခုကိုစတင်ခံစားမိလိုက်ရ
ပါတယ်။စိတ်ထဲမှာလည်း မမစိုးနေရာကိုဝင်ကာ ကိုယ်တိုင်အလိုးခံချင်တဲ့စိတ်တွေ တဖွားဖွားဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။
တစ်ဖက်ခန်းက ကိုသက်တို့ကလည်းတော်တော်လေးကို အရှိန်ရနေပါပြီ။မမစိုးအထဲကို ကိုသက်ဟာကြီး တစ်ချောင်းလုံးဝင်သွားပြီး ကိုသက်ခါးလေးလည်းတဖြည်း
ဖြည်းလှုပ်ရှားလာပါတယ်။မမစိုးက လည်း ကိုသက်ခါးကိုဖက်ထားရင်း အောက်ကနေတစ်ချက်တစ်ချက်ပြန်ကော့ပေးနေတာကိုလည်း တွေ့နေရပါ တယ်။ကိုသက်
တစ်ယောက်လည်း အောက်ပိုင်းကလှုပ်ရှားနေသလို အပေါ်ကလည်း မမစိုးနှုတ်ခမ်းတွေကို စုပ်ပေးလိုက် မမစိုးနို့တွေကို စို့ပေးလိုက်နဲ့ အလုပ်တွေကိုရှုပ်နေပါတယ်။
မေမိုးလည်း ဘောင်းဘီပေါ်ကလက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြန်လာပါတယ်။လက်ကိုမရပ်ခြင်လောက် အောင် ရှိန်းခနဲ ရှိန်းခနဲ အရသာတွေ့နေပါတယ်။ကိုသက်တို့
လည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မြန်လာပြီး နောက်ဆုံးတော့ ကိုသက်တစ်ယောက် တွန့်ခနဲဖြစ်သွားကာ မမစိုးကိုယ်ပေါ်ကိုမှောက်ကျသွားတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
မမစိုးနေရာမှာ ငါသာဆိုရင်ဆိုတဲ့ အသိတွေနဲ့စိတ်ကူးလိုက်ရင်း မမစိုးနို့ကို ကိုသက်စို့ပေးနေတာကို မျက်စိထဲမြင်ယောင်ရင်း ငါ့ကိုသာစို့ပေးရင်တော့ဘယ်လိုနေ
မလဲမသိဘူး လို့တွေးကာ လက်ကအလိုလိုနို့အုံ ပေါ်ကိုရောက်သွားပါတယ်။နို့သီးခေါင်းလေးက ထောင်နေတာကြောင့် အသာပွတ်ပေးနေတုန်း အရသာတွေ့လာ ပါတယ်။နောက်တော့ လက်တစ်ဖက်က စောက်ပတ်လေးပေါ်ကို ရောက်သွားကာ စောစောကလိုပွတ်ပေးနေ ရင်း စိတ်ကူးထဲမှာ ကိုသက်လီးကြီးနဲ့မမစိုးစောက်ပတ်
ထဲကို ဝင်နေတာကိုပြန်ခံစားမိရင်း အကွဲကြောင်းလေး ထဲကို လက်ခလယ်လေးနဲ့ မရဲတရဲ အသာလေးထိုးသွင်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။
စောစောကထွက်ထားတဲ့ အရည်တွေကြောင့်ရော စိတ်ကူးနဲ့ဖီးတက်နေတဲ့အရှိန်ကြောင့်ရော စောက်ပတ်လေးတစ်ခုလုံးစိုရွှဲနေတာကြောင့် နည်းနည်းလေးအထဲ
ကိုယ့်လက်ကို ကိုသက်လီးကြီးလို့ သဘောထားလိုက်ကာ နည်းနည်းချင်း အသွင်းအထုတ်လုပ်ပေး လိုက်တော့ စောစောကအရသာထက်တောင်ပိုကောင်းနေတာ
နောက်တော့ အထဲကနေ ဖျဉ်းခနဲဖြစ်သွားပြီး ခြေထောက်တွေပါတွန့်လိမ်ကောက်ကွေးသွားကာ အကြောထဲအထိ အီဆိမ့်သွားတဲ့အရသာကို မေမိုးတစ်ယောက်ခံ
နောက်တော့ အခြေအနေတွေကို ပြန်ဆင်ခြင်လိုက်မိတော့ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ရှက်သွားကာ လျှာလေးကိုထုတ်လိုက်ကာ ကြည်နူးကျေနပ်မှုတွေနဲ့ အနားကတစ်
ရှူးဘူးထဲကတစ်ရှူးစနဲ့ လက်ကိုသုတ်လိုက် ရင်း စောင်လေးကိုခြုံကာ အိပ်လိုက်ပါတော့တယ်။မနက်မိုးလင်းတော့ ကိုကိုသက်တို့ကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ရမှာကြောက်
နေသလိုပါပဲ။တကယ်တော့ ဟိုက သူတို့အတွဲက ဘာမှတောင်မသိပါဘူး။ကိုယ့်ဖာသာ ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်မလုံဖြစ်နေတာပါ။မနက်စာကော်ဖီ သောက်တော့ ခပ်မြန်
မြန်ပဲစားလိုက်ရင်း ကမန်းကတန်းပြန်ထလာလို့ မေမေကတောင်
မေမိုးလည်း စိတ်မပါ့တပါနဲ့ အခန်းထဲဝင်ကာ ခုတင်ပေါ်ကိုလှဲလိုက်ရင်း ခေါင်းပေါ်လက်တင်ကာစဉ်းစားနေ လိုက်မိတယ်။စိတ်ထဲမှာလည်း စာကျက်ချင်တဲ့စိတ်ကမ
ရှိတော့ အလိုလိုနဲ့ ညတုန်းကအကြောင်းတွေကိုပဲ ပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ဒီညလည်းသူတို့ လုပ်ကြအုံးမှာပဲ။ခုံပေါ်ကနေတက်ချောင်းရတာအဆင်မပြေလှဘူး။
နောက်တော့မှ အကြံရသွားပြီး သူတို့ဗီရိုနားလောက်ကို ဒီဖက်ခန်းကနေ အချွန်လေးတစ်ခုနဲ့ စိတ်ရှည် လက်ရှည်ထိုင်ကာ ဖောက်နေပါတယ်။နောက်တော့ စက္ကူ
အညိုရောင်လေးကိုလုံးပြီးပြန်ပိတ်ထားလိုက်တယ်။ ကဲမပိုင်လား။ဟိုဖက်ခန်းက ဗီရိုနားကိုလာရင် တံခါးဖွင့်လိုက်ရင် အပေါက်နေရာလေးက ဗီရိုတံခါးနဲ့ အလိုလို ကွယ်ထားပြီးသားလေ။တစ်ယောက်တည်း ကျေနပ်စွာအောင်ပွဲခံလိုက်ရင်း စိတ်လက်ပေါ့ပါးသွားတာကြောင့် စာကို စိတ်ပါလက်ပါကျက်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ညမြန်မြန်
မေမိုး ညစာစားပြီးတော့ အခန်းထဲဝင်ကာ စာအုပ်ကိုင်လို့ စာပြန်ကျက်နေပါတယ်။စာသာကျက်နေတာ ဟိုဖက်ခန်းကအသံတွေကို နားစွင့်နေရတာအမော။ဒီနေ့မှ ဘာဖြစ်တယ်မသိ သူတို့ကအပြင်သွားတာ ကြာလိုက်တာ။ညကိုးနာရီကျော်ကျော်လောက်မှာတော့ သူတို့လင်မယား အပြင်ကနေပြန်လာပါတယ်။ရေမိုးချိုး ကာ အခန်းထဲကိုဝင်သွားတော့ မေမိုးလည်း လက်ထဲကစာအုပ်ကို စားပွဲပေါ်ကိုပစ်တင်လိုက်ရင်း ကပ်ထားတဲ့ စက္ကူစလေးကိုအသာလေးခွာကာ တစ်ဖက်ခန်းကို ချောင်း
မေမိုးဆုတောင်းပြည့်ပါတယ်။မေမိုးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ သူတို့လင်မယား ခုတင်ပေါ်မှာထိုင်ရင်း တစ်ဦးကိုတစ်ဦး နမ်းနေကြပါတယ်။နှစ်ယောက်သား နှုတ်ခမ်း
တွေကို အငမ်းမရစုပ်ယူနေတာမို့ ချောင်းနေတဲ့ မေမိုးတောင် ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းကို လျှာလေးနဲ့ယက်မိနေပါတယ်။ကိုသက်လက်တွေက မမစိုးကိုယ်ပေါ်က အဝတ် တွေ
ကို ချွတ်ပေးလိုက်နေတုန်း မမစိုးကလည်း အားကျမခံ ကိုသက်အဝတ်တွေကိုပါပြန်ချွတ်ပေးနေပါတယ်။
ခဏချင်းမှာပဲ မမစိုးအဝတ်အစားတွေကင်းမဲ့သွားတာမို့ ကိုသက်က မမစိုးကိုယ်လုံးလေးကို ခုတင်ပေါ်ကို တွန်းလှဲလိုက်ရင်း မမစိုးလည်တိုင်လေးကိုနမ်းရှိုက်နေ
တာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။လက်ကလည်း မမစိုး နို့တွေကိုကိုင်ကာ နယ်နေတာမို့ မေမိုးလည်း ကိုယ့်ဖာသာကိုနို့လေးတွေပေါ်လက်ရောက်သွားကာ ညှစ်နေမိပါတယ်
။နောက်တော့ ကိုသက်က မမစိုးနို့တစ်လုံးကို ပါးစပ်ထဲထည့်ကာ စို့ပေးလိုက်ပါတယ်။လက်က တော့အောက်ကိုဆင်းကာ ပေါင်တန်တွေကိုပွတ်သပ်ပေးနေတော့ မမစိုးလည်းပေါင်လေးတဖြည်းဖြည်းကား လာပါတယ်။
နောက်တော့ ကိုသက်ခေါင်းကြီးက တရွေ့ရွေ့နဲ့အောက်ကိုဆင်းလာကာ မမစိုးပေါင်ကြားထဲရောက် သွားပြီး မမစိုးစောက်ပတ်ကို သူ့လျှာပြားကြီးနဲ့ ပင့်ကာ ယက်
တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။မမစိုး တစ်ယောက်လည်း ခေါင်းလေးမော့တက်သွားကာ ကိုသက်ခေါင်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ တင်းတင်းလေးကိုင်ထားပါတယ်။လျှာနဲ့ အယက်
ခံနေတဲ့ မမစိုးတော့မသိဘူး။မေမိုးတောင်မှ အထဲကနေဆစ်ခနဲဖြစ်လာပါတယ်။ကိုသက်ရယ် သမီးကို လည်းမမစိုးလိုယက်ပေးပါလားကွယ် လို့တောင်စိတ်ထဲကနေ
ရေရွတ်လိုက်ပြီး လက်ဝါးလေးနဲ့ ကိုယ့်စောက်ပတ် လေးကို အုပ်ကာ ပွတ်နေမိပါတယ်။ကိုသက်တစ်ယောက် မမစိုးစောက်ပတ်ကိုယက်ပေးနေတာ တဖြည်းဖြည်း မြန်လာလေ မမစိုးလည်းအပေါ်မှာ ခေါင်းကိုဘယ်ညာယမ်းနေကာ ခါးလေးကိုကော့ကာပေးနေပါတယ်။
နောက်တော့ မမစိုးတစ်ယောက် ကော့ပြန်လန်ကာ ငြိမ်သက်သွားပါတော့တယ်။အဲဒီအချိန်မှာ မေမိုး လည်း တစ်ကိုယ်လုံးတုန်တက်လာကာ တစ်ချက်နှစ်ချက်
တွန့်သွားပြီး အရသာကောင်းလေးကို ခံစားလိုက်ရပါ တယ်။တစ်ကိုယ်လုံးလည်း မောပန်းနွမ်းနယ်ကာ ခြေလက်တွေတောင်မသယ်ချင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားပါ တယ်။
ကိုသက်က မမစိုးပေါင်ကြားထဲကနေထလာပြီး မမစိုးနားကိုကပ်ကာ တိုးတိုးလေးကပ်ပြောလိုက်ရင်း ခုတင်ပေါ်ကိုပက်လက်လှန်အိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။မမစိုး
လည်း အိပ်နေရာကနေပြန်ထလိုက်ပြီး ဆံပင်တွေကို လုံးခြည်လိုက်ကာ ခေါင်းစည်းနဲ့စည်းလိုက်ပြီး ကိုသက်လုံခြည်ကို ဆွဲကာချွတ်လိုက်ပါတယ်။ပါးပျဉ်းထောင်နေ တဲ့မြွေတစ်ကောင်လို ကိုသက်လီးကြီးဟာငေါက်ခနဲ ပေါင်ကြားထဲကနေထောင်ထွက်လာပါတယ်။ရင်ဖိုလိုက်ရ တာကိုကိုသက်ရယ်။အဲဒါကြီးနဲ့ မေမိုးကိုလုပ်ပေးပါ
မမစိုးလည်း ကိုသက်ပေါင်ကြားထဲ ဝင်ထိုင်လိုက်ရင်း လက်တစ်ဖက်နဲ့ ကိုသက်လီးကြီးကိုဆုတ်ကိုင် လိုက်ကာ အပေါ်အောက်ဆွဲပေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
နောက်တော့ မမစိုးခေါင်းလေးငုံ့လိုက်ကာ ပါးစပ်လေး ဟပြီး ကိုသက်လီးကြီးကိုငုံပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုသက်လည်း ပါးစပ်လေးဟသွားပြီး ခေါင်းလေးပါထောင်လာပါ
မေမိုးလည်း ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် လက်ခလယ်လေးကို ပါးစပ်ထဲသွင်းကာ ကိုကိုသက်လီးအမှတ်နဲ့ တစ်ဖက်ခန်းကနေချောင်းနေရင်း စုပ်ယူလိုက်မိပါတယ်။နောက်
တော့ ကိုသက်လည်းမမစိုးကို ရပ်ခိုင်းလိုက်ကာ ပက်လက်လေးဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်လိုက်ပါတယ်။မမစိုးပေါင်ကြားထဲ ငုတ်တုတ်ထိုင်လိုက်ရင်း သူ့လီးကြီးကို အရင်း
ကနေလက်ကကိုင်ကာ မမစိုးစောက်ပတ်ဝလေးကိုတေ့လိုက်ပြီး မသွင်းသေးပဲ အဝနားမှာကလိပေးနေပါ တယ်။မမစိုးလည်း အားမလိုအားမရဖြစ်လာကာ ကိုကို
သက်ခါးလေးကိုလှမ်းဖက်လိုက်ကာ အောက်ကလည်း အပေါက်တည့်အောင်နေရာရွေ့ပေးနေပါတယ်။
အဲဒါကိုကြည့်နေရင်း မေမိုးလည်း ကိုယ့်လက်ခလယ်လေးကို စိုရွှဲနေတဲ့စောက်ပတ်ဝလေးထဲကို အသာလေးထည့်လိုက်မိပါတယ်။လက်ခလယ်ပေမယ့် အပျို
စောက်ပလေးထဲကို စေးစေးကျပ်ကျပ်လေးဝင်သွား တာမို့ မေမိုးတစ်ယောက် ပါးစပ်လေးပါဟသွားရပါတယ်။နောက်တော့ အသာလေးပြန်ထုတ်လိုက် ပြန်သွင်း လိုက်လုပ်နေမိပါတယ်။တစ်ဖက်ခန်းက ကိုကိုသက်ကလည်း မမစိုးစောက်ပတ်ထဲရောက်နေတဲ့ သူ့လီးကြီးကို မှန်မှန်လေးအသွင်းအထုတ်လုပ်နေတာကြောင့် မမစိုး
လည်း ကိုကိုသက်ခါးကို ခြေနှစ်ချောင်းချိတ်ထားကာ မျက်လုံးလေးမှိတ်လို့ ပါးစပ်လေးဟကာ ဖီလင်အပြည့်ခံစားနေတာကို ကြည့်နေရင်း မေမိုးလည်း မမစိုးကို မနာလိုတွေဖြစ်နေပါတယ်။
ချက်ခြင်းပဲ အခန်းထဲကိုပြေးဝင်သွားကာ မမစိုးနေရာမှာ ဝင်အလိုးခံချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာပါ တယ်။အထဲကို သွင်းနေတဲ့လက်ကလည်း တဖြည်းဖြည်းမြန်
လာပါတယ်။စိတ်ထဲကလည်း ကိုကိုသက်ကို တောင့်တကာ ကိုကိုသက်လိုးပေးနေတယ်လို့ သဘောထားလိုက်ကာ လက်ကိုတွင်တွင်ကြီး သွက်သွက်လေး လုပ်ပေး
မေမိုး ပါးစပ်ကနေတောင်တီးတိုးလေးရေရွတ်မိပါတယ်။နောက်တော့ အထဲကနေဖျဉ်းခနဲ ဖျဉ်းခနဲ ဖြစ်သွားကာ တစ်ကိုယ်လုံးရှိသမျှအကြောတွေပါ ဆိမ့်ကျသွား
လောက်အောင်ကို ကောင်းသွားပါတယ်။တစ်ဖက် ခန်းကမမစိုးတို့လည်း တစ်ချီပြီးသွားလို့ အဝတ်တွေတောင်ပြန်ဝတ်နေပါပြီ။မေမိုးလည်း ယနေ့အဖို့ လုံလောက် သွားပြီမို့ အသာလေး ခုတင်ပေါ်ပြန်လှဲနေရင်း စဉ်းစားအကြံထုတ်နေမိပါတယ်။
အင်း မမစိုးလိုနေ့တိုင်းသာ အလိုးခံရရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲ။ကိုကိုသက်ကို တိုးတိုးလေးဖွင့်ပြောရမှာလား အို..ဘယ်ဖြစ်မတုန်း သူငါ့ကိုအထင်သေးသွားမှာပေါ့။မမစိုး
သိရင် ငါ့ကိုသတ်မှာပဲ။ဒါမှမဟုတ် ရည်းစားထားပြီး အလိုးခံရင်ကော။အို..မဖြစ်သေးပါဘူး။ရည်းစားထားတာအိမ်ကသိသွားရင် မိုးမီးလောင်အုံးမယ်။နောက်ပြီး ငါရတဲ့
ရည်းစားကရော ကိုကိုသက်လောက်လီးကြီးပါ့မလား။အင်း..ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။အို..မစဉ်းစားတော့ ပါဘူးလေ။စာကိုပဲကျက်လိုက်တော့မယ်။မေမိုးတစ်ယောက် ဆန္ဒနဲ့ဦးဏှောက်လွန်ဆွဲကာ ဒွိဟစိတ်တွေနဲ့ အိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်။နောက်နေ့တွေလည်း ကိုကိုသက်ကို အရောဝင်ဖို့ကြိုးစားမိပါတယ်။ဒါပေမယ့် သူကကိုယ့်
ကို ကလေးလို့ထင်နေလားမသိဘူး။လုံးဝကိုဂရုမစိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပြနေတယ်။ဟွန်းမုန်းစရာကြီး။စောင့်ကြည့်လိုက် ပါ။မေမိုးဘယ်လိုအစွမ်းအစရှိလဲဆိုတာကို။အိမ်
မှာကတော့ လူကြီးတွေနဲ့ဆိုတော့ လုပ်သာလုပ်နေရတာ သေဘေးကိုလည်းကြည့်နေရသေးတယ်။
ဒီလိုနဲ့ မေမိုး မမစိုးတို့အခန်းကို နေ့တိုင်းချောင်းကြည့်နေရင်း ကိုယ့်ဖာသာအာသာဖြေနေတာများတော့ စာဖက်ကိုအာရုံမရနိုင်ပဲ လပါတ်စာမေးပွဲမှာ အဆင့်တွေ
ကျလာပါတယ်။ဒါကိုလူကြီးတွေသိတော့ အားလုံးတိုင်ပင်ကြပြီး မမစိုးက
နောက်တော့ မေမိုးလည်းတစ်ဆင့်တက်ပြီး ကိုကိုသက်နဲ့စာသင်နေတဲ့အချိန်တွေဆိုရင် အင်္ကျီကိုပါးပါး လေးနဲ့ လည်ဟိုက်တာလေးတွေပဲရွေးကာ ဝတ်ထားပါ
တယ်။နောက်တော့ လက်ကနေဘောပင်ကိုဆော့ရင်း အောက်ကို တမင်လွှတ်ချလိုက်ကာ ကိုကိုသက်ရှေ့မှာ ကုန်းကောက်ပြလိုက်ပါတယ်။
အစပိုင်းတော့ ကိုကိုသက်တစ်ယောက် မျက်နှာလွှဲနေပေမယ့် နောက်တော့ သူလည်း ဘာသားနဲ့ထု ထားတာမို့လို့လဲ ကြည့်တော့တာပေါ့။ကိုကိုသက်တစ်ယောက်
ကြည့်နေရင်း တံတွေးတွေမျိုချနေလိုက်တာ မေမိုးပြန်ကြည့်လိုက်တိုင်း ကိုကိုသက်မလုံမလဲဖြစ်သွားတဲ့မျက်နှာလေးကိုတွေ့ရလေ မေမိုးတစ်ယောက်ရင်ထဲ မှာ
တစ်လလောက်ကြာတော့ မမစိုးတစ်ယောက် ဖောင်ကြီးဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်ကို သင်တန်းတက်ဖို့စာ ရင်းထွက်လာပါတယ်။ကိုကိုသက်ကိုကြည့်ရတာ မှိုင်နေသလို
ပဲ။စာသင်တာလည်းစိတ်မပါသလိုပဲ။ဒါများ ကိုကို သက်ရယ် မမစိုးမရှိလည်း မေမိုးကိုလာလိုးလို့ရတာပဲဟာကို။မမစိုးသွားမယ့်ညကတော့ သူတို့လင်မယား ညလုံး
ပေါက်နီးပါးဆွဲနေကြပါတယ်။မမစိုးလည်း မေမိုးကိုသေချာဂရုတစိုက်သင်ပေးဖို့ကို အထပ်ထပ်မှာရင်း သင်တန်းကို သွားပါတော့တယ်။
ညဖက်စာသင်ချိန်ရောက်တော့ အပါးဆုံး အဟိုက်ဆုံးဆိုတဲ့ အင်္ကျီလေးကိုရွေးဝတ်လိုက်ရင်း မှန်တင်ခုံ ရှေ့မှာသေချာ အလှပြင်လိုက်ကာ သနပ်ခါးပါးပါးလေးလူး
ကာ ရေမွှေးလေးနည်းနည်းကိုဆွတ်လိုက်ရင်း စာသင် ခုံမှာ သေချာစိတ်ပါလက်ပါထိုင်ကာ ကိုကိုသက်အလာကိုစောင့်နေရင်း အကြံဥာဏ်တွေထုတ်နေမိပါတယ်။
ညစာ စားပြီးတော့ ကိုကိုသက်ရောက်လာပါတယ်။စာသင်နေရင်း မေမိုးကိုခိုးကြည့်နေတာတွေကို မေမိုးတွေ့နေလိုက်ပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်း စာသင်နေရတာ
စိတ်မပါသလို မေမိုးလည်းစာထဲကိုစိတ်မ ရောက်ပါဘူး။မေမိုးမှာတော့ တိတ်တခိုးအချစ်ရဲ့ဖမ်းစားမှုတွေကြောင့် ပိုလို့သာခံစားနေရပေမယ့် သူကတော့ အိနြေ္ဒကြီး
တစ်ခွဲသားနဲ့ နေနိုင်လိုက်တာ ကိုကိုသက်ရယ်။နောက်ဆုံးတော့ မေမိုးလည်း အချစ်စိတ်ရဲ့စေစားမှုကို တောင့်မခံနိုင်တော့ပဲ စာသင်လို့ပြီးတော့ ကိုကိုသက်နားကို
သွားကာ ကိုကိုသက်လက်မောင်းအိုးကြီးကို မေမိုး နို့လေးနှစ်လုံးကိုပြားကပ်နေအောင်ဖိထားလိုက်ရင်း
‘ဟင် ဘာလုပ်မလို့လဲ’ ပြောပြောဆိုဆို ကိုကိုသက် ဖက်ထားတဲ့မေမိုးလက်ကို ပြန်ဆွဲဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ မေမိုးကအတင်းဖိကာ ဖက်ထားတာကြောင့် သူလည်း
‘အေး..အေး ပေးမယ်ကွာ ဖယ်တော့ ကိုကိုသက်ပင်ပန်းလှပြီ လွှတ်တော့နော်’ လို့ပြောကာ အတင်းဆွဲ ဖယ်လိုက်ရင်း သူ့အခန်းထဲကိုဝင်သွားပါတယ်။မေမိုးတစ်
ယောက်ကတော့ ကျေနပ်ဝမ်းသာခြင်းတွေနဲ့ တစ်ယောက်တည်း ကျန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့ ပေါ့ပါးသွက်လက်စွာ စာအုပ်တွေကိုသိမ်းလိုက်ပြီး သွားတိုက် အပေါ့
အခန်းထဲရောက်တော့ ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေကို အကုန်ချွတ်လိုက်ကာ ညဝတ်အင်္ကျီလေးကို ကောက်စွပ်လိုက်ပြီး အောက်ကတော့ ဘောင်းဘီတိုလေးကိုဝတ်
လိုက်ကာ ခုတင်ပေါ်ကိုတက်လိုက်ရင်း ပက်လက်လေးအိပ်လိုက်ပါတယ်။ ကိုကိုသက်တစ်ယောက်ဘာများလုပ်နေမလဲဆိုတာ သိချင်လို့ ဆို့ထားတဲ့ စက္ကူစလေးကို ဖယ်လိုက်ကာ ချောင်းကြည့်လိုက်တော့ ကိုကိုသက်တစ်ယောက် သူ့လက်ပတော့ကိုဖွင့်ကာ အပြာကားကြည့်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။
ညားထားတာ တစ်လလောက်ပဲရှိသေးတော့ သူလည်းမမစိုးကိုဘယ်ခွဲချင်ပါ့မလဲ။အို ကိုကိုသက်ရယ် မမစိုးမရှိလဲ မေမိုးတစ်ယောက်လုံးရှိပါတယ်။မေမိုး ကိုကို
အပြာကားကြည့်နေရင်း ကိုကိုသက်တစ်ယာက် လုံခြည်စကိုဖြေချလိုက်ရင်း လက်တစ်ဖက်နဲ့ သူ့လီးကြီးကိုကိုင်ထားကာ အပေါ်အောက်လှုပ်ရှားနေရင်း ဂွင်းတိုက်
နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။တစ်အောင့် လောက်ကြာတော့ ကိုကိုသက်မျက်နှာကြီး ရှုံ့မဲ့သွားကာ ဖြူဖြူပျစ်ပျစ်အရည်တွေ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို ပန်းထွက် ကုန်ပါ
တော့တယ်။မေမိုးလည်း အသာလေးပြန်လှဲနေလိုက်ကာ စတင်အိပ်စက်လိုက်ပါတယ်။အိပ်မက်ထဲမှာ တော့ မေမိုးနဲ့ကိုကိုသက်တို့ ချစ်ပွဲကြီးဆင်နွှဲနေကြမယ်ဆိုတာ
ကတော့ အထူးပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး။နောက်နေ့ကျောင်းလွှတ်ချိန်ရောက်တော့ မေမိုးကျောင်းဝကိုလျှောက်လာရင်း ကြည့်လိုက်တော့ ကိုယ့်မျက်လုံးကိုတောင်မ
ယုံနိုင်ပါဘူး။ကိုကိုသက်တစ်ယောက် မေမိုးကိုလာကြိုနေတယ်လေ။ခါတိုင်းတစ်ခါမှ လာမကြိုဘူးတော့အရမ်းကိုအံ့သြမိတာပေါ့။ပြုံးစစနဲ့ ကိုကိုသက်မျက်နှာကို တွေ့လိုက်ရတော့ မေမိုးရင်ထဲ ရှက်သလိုလို ပျော်သလိုလိုပါပဲ။ကားပေါ်ရောက်တော့
နှစ်ယောက်သား စကားမဆက်မိကြပါဘူး။ခံစားချက်တွေကိုယ်စီနဲ့ဆိုတော့ နှစ်ယောက်လုံးက ကိုယ့်လိပ်ပြာ ကိုယ်မလုံဖြစ်နေကြတော့ ပြောစရာစကားလုံးတွေ
ကသိပ်မရှိဘူးလေ။ဒီလိုနဲ့ပဲ အိမ်ပြန်ရောက် လာကြပါတယ်။
စာသင်ချိန်ရောက်တော့လည်း ထုံးစံအတိုင်း မေမိုးကိုကြည့်နေတဲ့ ကိုကိုသက်မျက်လုံးရွဲကြီးတွေကို မေမိုးရင်မဆိုင်နိုင်တော့လို့ မေမိုးခေါင်းလေးငုံ့ထားရပါတယ်။
သူသိပ်ဆိုးတာပဲကွာ မပွင့်တပွင့်နဲ့ သူများနေရတာ ခက်လိုက်တာ။စာသင်လို့ပြီးတော့ မေမိုးစာအုပ်တစ်ထပ်နဲ့ထလိုက်တာ စားပွဲခုံခြေထောက်ကို ခလုတ်တိုက်မိလို့ ခန္ဓာကိုယ်ကယိုင်သွားပါတယ်။ကိုကိုသက်က လှမ်းဖမ်းလိုက်တာမို့ မေမိုးကိုယ်လုံးလေး ကိုကိုသက်ရင်ခွင်ထဲကို အလိုက်သင့်လေးမှီကျသွားပါတယ်။စာအုပ်တွေက
စိတ်ကူးနဲ့သာ မေမိုးတစ်ယောက်ရူးနေတာပါ။တကယ်တမ်း နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ ကိုကိုသက်ရင်ခွင်ထဲလဲ ရောက်ရော မေမိုးခြေတွေလက်တွေသာမက အသံတွေ
တောင်တုန်နေပါတယ်။ကမန်းကတန်းလှမ်းဆွဲလိုက်လို့ ကိုကိုသက်လက်တစ်ဖက်က မေမိုးရင်အစုံပေါ်ကိုရောက်နေပါတယ်။သူကလည်း ရုတ်တရက်ဆိုတော့ ကြောင် နေပါတယ်။ဒါကိုပဲ မေမိုးတစ်ယောက် ရင်တွေတလှပ်လှပ်ခုန်နေရပါတယ်။ဝတ်ထားတဲ့ ဘရာစီယာကလည်း ပါးတာကြောင့် တကယ့်အသားအတိုင်းဖြစ်နေ
ပါတယ်။မေမိုးလည်း အသာလေးရုန်းလိုက်တော့မှ သူလည်း သတိပြန်ဝင်လာကာ
မေမိုးလည်းထူပူနေတော့ ဘာစကားမှာပြန်မပြောနိုင်ပဲ ကိုကိုသက်ရင်ခွင်ထဲက ရုန်းထွက်လိုက်ကာ စာအုပ်တွေကို ကပြာကယာ ကောက်လိုက်ရင်း အခန်းထဲဝင်
ပြေးလာခဲ့ပါတယ်။ကိုကိုသက်တစ်ယောက်သာ အပြင်မှာ ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
အခန်းထဲရောက်တော့ ခုန်နေတဲ့ရင်ခုန်သံဟာ တော်တော်နဲ့ကိုမရပ်သေးပါဘူး။ဒီလောက်ကောင်းနေတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးကို ခဏလေးပဲခံစားလိုက်ရတာ ကိုယ့်
ကိုယ်ကိုမကျေမနပ်ဖြစ်နေမိပါတယ်။တော်တော်ကြာ ကြာလေးနေလိုက်မိရင်ကောင်းသား။အခုတော့ ကိုကိုသက်လက်လေးနဲ့ကိုင်မိတဲ့ ရင်သားလေးတွေကို နှမြော တသစွာ ကိုင်ကြည့်နေမိပါတယ်။အို ရှက်လိုက်တာ။သူရောဘယ်လိုခံစားနေရမလဲ။သူလည်းရင်တွေခုန်နေ တယ်ဆိုတာမေမိုးလည်း သိပါတယ်။သူ့ရင်ခွင်ထဲခေါင်း
အခန်းထဲရောက်ရောက်ခြင်း ကိုကိုသက်တစ်ယောက် ခုံပေါ်ကအရက်ပုလင်းထဲကအရက်တစ်ခွက်ကို ငှဲ့လိုက်ရင်း တစ်ရှိန်ထိုးသောက်ချလိုက်တာကိုတွေ့လိုက်
ရပါတယ်။သွားပါပြီ ဒီညတော့မတွေ့ရတော့ပါဘူး။ မကျေမနပ်နဲ့ ပါးစပ်ကနေစူပွစူပွပြောလိုက်ရင်း အိပ်ပျော်ဖို့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။
တစ်အောင့်မှေးခနဲအိပ်ပျော်သွားပြီး အသားကိုလာထိနေလို့ ရုတ်တရက်မျက်လုံးကိုအသာလေးဖွင့် ကြည့်လိုက်မိတော့ မေမိုးလန့်မအော်မိအောင်ကြိုးစားလိုက်ရ
မေမိုးလည်း ရုန်းဖယ်လိုက်ရနိုးနိုး ဆက်ဟန်ဆောင်ရနိုးနိုးနဲ့ စိတ်နှစ်ခုလွန်ဆွဲနေပါတယ်။ငါအခုနေ ရုန်းလိုက်ရင် သူပြန်ထွက်သွားမှာပေါ့။ဆက်ပြီးအိပ်ပျော်ဟန်
ဆောင်နေရင်လဲ သူကဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာ ကိုလည်းသိချင်နေသေးတယ်။ရင်သားတစ်ဝိုက်မှာလည်း ရွစိရွစိဖြစ်နေပါတယ်။ဘာမှအခုအခံမဝတ်ထားတော့ သူလည်း စိတ်တိုင်းကျ ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်နေပါတယ်။မေမိုးလည်း ပါးစပ်ကအသံမထွက်မိအောင် အားတင်း ထားလိုက်ကာ ဆက်ပြီးမျက်စိမှိတ်နေလိုက်မိပါတယ်။
မေမိုးတစ်ယောက် တိတ်တခိုးလေးစာစွဲလမ်းလို့နေပေမယ့်လည်း အခုလိုကြီးအခန်းထဲကို အသာလေး ဝင်လာကာ ပိုင်စိုးပိုင်နင်းနဲ့ ကိုယ်တွယ်ပွတ်သပ်နေတဲ့ ကိုကိုသက်ကို ရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရတော့ နည်းနည်း တော့ကြောက်သွားတာအမှန်ပါပဲ။အခုမှပဲသေချာတွေးမိတယ်။မေမိုးအော်လိုက်လို့ လူကြီးတွေနိုးသွားရင် ကိုကိုသက်ရောမေမိုးပါ ပြဿနာတွေအကြီးအကျယ်တက်သွားနိုင်တယ်။နောက် လူကြားမကောင်း သူကြားမ ကောင်းဖြစ်မှာလည်း အသေအချာပါပဲ။အိုး..ပြောရင်း
ဆိုရင်း မေမိုးနို့သီးခေါင်းလေးကိုသူစမ်းမိသွားပါတယ်။ မေမိုးနို့သီးခေါင်းလေးကလည်း နည်းနည်းလေးကြွတက်လာတာကြောင့် ကိုကိုသက်က လက်မနဲ့လက်ညှိုး ကြားညှပ်ကာ ဖိခြေပေးနေပါတယ်။မေမိုးတစ်ယောက် အသံမထွက်မိအောင်ကို မနည်းကိုထိန်းချုပ်ထားလိုက် ရပါတယ်။
မေမိုးငြိမ်နေတာကို သူသိသွားလားမသိဘူး။မေမိုးမျက်နှာပေါ်ကို သူ့မျက်နှာကြီးအုပ်မိုးလာတာကို ကိုကိုသက် နှာခေါင်းကလေပူတွေကြောင့် မေမိုးသိလိုက်ပါ
တယ်။အရက်နံ့ကလည်းထောင်းခနဲ ရလိုက်တာမို့ မေမိုးလည်းအသာလေး အသက်အောင့်ထားလိုက်ပါတယ်။ကိုကိုသက်ကမေမိုးနဖူးလေးကိုတစ်ချက်နမ်းလိုက် ပါတယ်။နောက်တော့ မေမိုးဆံပင်လေးတွေကိုလက်နဲ့သပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဆံပင်တွေကိုသပ်တင်ပေး လိုက်ပြီး မေမိုးလည်တိုင်လေးကို သူ့ပါးစပ်ကြီးနဲ့ငုံလိုက်
မိချိန်မတော့ မေမိုးဘယ်လိုမှ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေ လို့မရတော့ပါဘူး။
မေမိုးအသံကြောင့် ကိုကိုသက်ပြန်ခွာသွားပါတယ်။မေမိုးလည်း မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ကိုကိုသက်က မေမိုးကို သူ့နှုတ်ခမ်းပေါ်ကို လက်ညှိုးလေးတင်ပြကာ
တိတ်တိတ်နေဆိုတဲ့ သဘောမျိုးလုပ်ပြ ပါတယ်။နောက်တော့ မေမိုးနှုတ်ခမ်းပါးလေးကို သူ့နှုတ်ခမ်းထူကြီးနဲ့ ဆွဲစုပ်ယူကာ နမ်းလိုက်မိချိန်မတော့ မေမိုး လည်းတင်း
ထားသမျှ အကုန်လုံးအရည်ပျော်ကျသွားကာ မျက်လုံးလေးတွေပါစင်းကျသွားပါတော့တယ်။
မေမိုးလည်း နဂိုကမှ တိတ်တိတ်လေးကျိတ်ခါ ချစ်နေရသူမို့ အခုလိုကိုယ်တွေ့ခံစားလိုက်မိချိန်မတော့ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ကိုကိုသက်အနမ်းတွေကိုပြန်တုန့်ပြန်
ကိုကိုသက်လည်း မေမိုးနှုတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းနေရင်း သူ့လျှာကြမ်းကြီးကို မေမိုးပါးစပ်ထဲအတင်းထိုး ထည့်ကာ မေမိုးပါးစပ်ထဲမှာ မြွေတစ်ကောင်လိုလျှောက်ကစား
နေပါတယ်။မေမိုးလည်း သူ့လျှာကြီးကို ကိုယ့်လျှာ လေးနဲ့ထိမိတဲ့အခါ တစ်ကိုယ်လုံး သိမ့်ခနဲဖြစ်သွားတာမို့ အလိုက်သင့်လျှာလေးပြန်ထုတ်ပေးလိုက်မိပါတယ်။ ကို
ကိုသက်က မေမိုးလျှာလေးကိုနှုတ်ခမ်းနှစ်ခုနဲ့ စုပ်ယူလိုက်ပါတယ်။လက်တစ်ဖက်ကမေမိုး အင်္ကျီကြယ်သီး တွေကိုတစ်ခုခြင်းဖြူတ်နေပါတယ်။
ကြယ်သီးတွေပြုတ်သွားလို့ လွတ်ထွက်လာတဲ့ မေမိုးရဲ့ဖိုဆိုလို့ ယင်ဖိုတောင်မသန်းရသေးတဲ့ ကိုယ်တိုင်တောင် ရေချိုးတုန်းဆပ်ပြာတိုက်တဲ့အချိန်ပဲကိုင်မိတဲ့ နို့အုံ
လုံးလုံးလေးကို သူ့လက်ကြမ်းကြီးနဲ့ ဆုပ်ကာ ဖွဖွလေးညှစ်ပေးနေပါတယ်။မေမိုးလည်း အရသာတွေက တလိပ်လိပ်နဲ့ ရင်ခေါင်းထဲကတက်လာတာ မို့ ကျောပြင်လေး
ပါ အိပ်ယာပေါ်ကနေကြွတက်လာပါတယ်။လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆုပ်နယ်နေရင်းက နို့သီးခေါင်းလေး ကိုလက်မနဲ့ ဖိကာပွတ်ပေးနေတာကြောင့် မေမိုးလည်း စိတ်တွေထ
ကြွလာကာနို့သီးလေးတွေပါ ထောင်တက်လာပါတယ်။ မေမိုးနို့လေးတွေကို ကိုကိုသက်ကို စို့ပေးစေချင်တာကြောင့် လည်တိုင်နားမှာ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ ကိုကိုသက်
ကိုကိုသက်ကတော့ အထူးကျွမ်းကျင်နေတာကြောင့် မေမိုးဘာလိုနေလဲဆိုတာကိုနားလည်လိုက်ပြီး ကော့ထောင်နေတဲ့ မေမိုးနို့သီးလေးကို ပါးစပ်ထဲကိုထည့်ကာ
လျှာလေးနဲ့ဝိုက်ကာ ကစားပေးရင်း တစ်ချက်တစ် ချက် စို့ပေးနေပါတယ်။လက်တစ်ဖက်ကလည်း ကျန်တဲ့နို့သီးခေါင်းလေးကို ခြေပေးလိုက် နို့အုံလေးကို ဆုပ်ပေး
လိုက်နဲ့မို့ မေမိုးလည်း ကိုကိုသက်ခေါင်းကြီးကိုသာ ရင်ဘတ်နဲ့ကပ်ကာ ဖက်ထားနေမိပါတယ်။
မေမိုးပါးစပ်က ညည်းသံလေးတွေပါထွက်လာတာကြောင့် ကိုကိုသက်လည်း မေမိုးနို့လေးနှစ်လုံးကို တစ်လှည့်စီပြောင်းကာ စို့ပေးနေပါတယ်။လက်ကလည်း
အောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းဆင်းလာကာ မေမိုးဗိုက်သား လေးကိုပွတ်ပေးနေပါတယ်။နောက်တော့ အောက်ကိုရွေ့လာပြီး မေမိုးပေါင်တန်လေးတွေကို ဒူးခေါင်းကနေစ
ပြီး အပေါ်ကို လက်ထိပ်ဖျားလေးနဲ့ တရွရွတက်လာကာ နေမရထိုင်မရဖြစ်အောင်ကလိပေးနေပါတယ်။မေမိုးလည်း ပေါင်တန်လေးကို မသိမသာလေးကားပေးလိုက်
ကောင်းလိုက်တာ ကိုကိုသက်ရယ် ကိုယ့်လက်နဲ့ကိုယ်ပွတ်တာထက် တခြားစီပဲ မေမိုးလည်းခါးလေးပါ ကော့တက်သွားပါတယ်။ကိုကိုသက်က အကွဲကြောင်းနေ
ရာလေးကို လက်ချောင်းလေးနဲ့ အစုန်အဆန်ပွတ်ပေး နေပြီးတော့ မေမိုးဘောင်းဘီလေးကိုချွတ်ဖို့ပြင်လိုက်တော့ မေမိုးလည်း ဒီထက်ပိုတဲ့အရသာကို ခံစားချင်လှပြီ
မို့ မရှက်အားတော့ပဲ အလိုက်သင့်လေး ခါးလေးပါကြွပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘောင်းဘီလေးကျွတ်သွားလို့ ထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာတဲ့ မေမိုးစောက်ပတ်လေးကို ကိုကိုသက်က သေချာကြည့်နေတာမို့ မေမိုးလည်း ရှက်လွန်းလို့ လက်ဝါး
လေးနဲ့အုပ်ထားမိပါတယ်။နောက်တော့ ကိုကိုသက် ခေါင်းလေးက အောက်ကိုငုံ့ဆင်းလာကာ မေမိုးပေါင်တွင်းသားလေးကို လျှာစောင်းလေးနဲ့ ဒူးနားကနေအပေါ်ကို
နောက်တော့ ပေါင်ကြားနေရာလေးကို စုပ်ပေးလိုက် မေမိုးလက်ဝါးနဲ့ကွယ်ထားလို့ လွတ်တဲ့နေရာလေး ကိုလျှာထိပ်လေးနဲ့ထိုးလိုက် ကလိပေးနေတာမို့ မေမိုး
လည်း ဆက်အုပ်ထားဖို့အင်အားမရှိတော့ပဲ လက်ဝါးလေး ကိုဖယ်ပေးလိုက်ကာ ရှေ့ဆက်ခံစားရမယ့် အရသာကိုငံ့လင့်နေမိပါတယ်။
ပေါင်တန်လေးနှစ်ဖက်ကို ကိုင်ထားတဲ့ ကိုကိုသက်လက်ကို မေမိုးတင်းတင်းလေးဆုပ်ကာ ကိုင်ထား လိုက်မိပါတယ်။ရင်ထဲမှာလည်း ဗလောင်ဆူနေပါတယ်။ပေါင်
တန်လေးကိုလည်း ကားသထက်ကားပေးနေလိုက် ပါတယ်။
စောက်ပတ်လေးကို လျှာနဲ့ယက်ပေးနေရင်း ကိုကိုသက်က သူ့လျှာလေးကို မေမိုးစောက်ခေါင်းလေးထဲ ကိုထည့်လိုက်ကာ အထဲကိုထည့်ကာ အထဲမှာကစားပေး
လိုက် စောက်စေ့လေးကို လျှာထိပ်လေးနဲ့ထိုးပေးလိုက် နဲ့ လုပ်ပေးနေတာမို့ မေမိုးတစ်ယောက် တစ်ကိုယ်လုံးကအကြောတွေ တဖျဉ်းဖျဉ်းနဲ့ထကြွလာပါတယ်။ ကိုကိုသက်ခေါင်းကြီးကိုလည်း စောက်ပတ်နဲ့ကွာသွားမှာစိုးလို့ လက်နဲ့အတင်းဖိကပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ကိုကို သက်က တစ်ခါတစ်ခါ စောက်စေ့လေးကို နှုတ်ခမ်းနှစ်
မေမိုးလည်း ဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်တော့ပါဘူး။ရှိသမျှအားနဲ့ အထဲကိုဝင်လာတဲ့ လက်ခလယ်ကို ညှစ်ပေး ထားလိုက်ပါတယ်။ကိုကိုသက်ကတော့ အားနေတဲ့လက်
တစ်ချောင်းကို မေမိုးနို့သီးခေါင်းလေးဆီပို့ကာ လက်နှစ်ချောင်းနဲ့ညှပ်ကာ ခြေပေးနေပါတယ်။နို့သီးခေါင်းကိုလည်းကလိခံရ ၊ စောက်စေ့လေးကိုလည်းလျှာနဲ့ အယက်
ခံရ ၊ စောက်ခေါင်းထဲကိုလည်း လက်ချောင်းလေးနဲ့ကလိခံရတာတင်မက ကိုကိုသက်လက်သန်းလေး ကတစ်ချက်တစ်ချက် စအိုဝလေးကိုပါ လာလာပွတ်ဆွဲနေတာ
ကြောင့် မေမိုးလည်း ခဏချင်းမှာပဲ တစ်ကိုယ်လုံး တွန့်လိမ်လာကာ စောက်ခေါင်းထဲကအရည်တွေတပျစ်ပျစ်နဲ့ ကျဆင်းလာပါတော့တယ်။ကိုကိုသက်ခေါင်းကဆံ
ပင်တွေကိုလည်း အတင်းဆောင့်ဆွဲထားကာ အရသာထူးတွေကိုတစ်ဝကြီးခံစားလိုက်ရပါတယ်။
နောက်တော့ ကိုကိုသက်က မေမိုးပေါင်ကြားထဲကနေထလာပြီး လုံခြည်ကိုဖြေချလိုက်တော့ မေမိုးစိတ် ကူးထဲကနေ စွဲလမ်းနေတဲ့ ကိုကိုသက်လီးကြီးဟာ
ငေါက်ခနဲထွက်လာပါတော့တယ်။ကိုကိုသက်က မေမိုးနှုတ်ခမ်းလေးကို စုပ်ယူပေးလိုက်ရင်း မေမိုးမျက်နှာနားကို သူ့လီးကြီးကိုတိုးလာပါတယ်။နောက်တော့ မေမိုး
နှုတ်ခမ်းနားမှာ တရမ်းရမ်းနဲ့လုပ်ပြနေပါတယ်။စိတ်ကူးနဲ့သာ စုပ်ပေးချင်နေတာ တကယ်တမ်းတော့မေမိုး ကိုကိုသက်လီးကြီးကို ကိုင်ကြည့်ဖို့တောင် မဝံ့ရဲပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ကိုကိုသက်ဘာလိုနေတယ်ဆိုတာကို မေမိုးလည်းအလိုလိုသိလာပြီမို့ မေမိုးပါးစပ်လေးကို အဆင်သင့် ဟပေးထာလိုက်ပါတယ်။ကိုကိုသက်ကလည်း မေမိုးဟပေးထားတဲ့ပါးစပ်လေးထဲကို သူ့လီးကြီးကို ဖြည်းဖြည်းလေးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ညှီစို့စို့အနံ့နဲ့ ငန်ကျိကျိအရသာလေးတွေကိုစတင်ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ ကိုကိုသက်ကိုမော့ကြည့်လိုက်တော့ သူလည်းတော်တော်လေးအရသာတွေ့နေပုံရတာကြောင့် မေမိုးလည်း လျှာလေးကိုနည်းနည်းလှုပ်ပေးကာ ကစားပေးလိုက်ပါ
‘ရှီး..ကျွတ်..ကျွတ်..ကောင်းလိုက်တာ ကလေးရယ်’ လို့ပြောကာ မေမိုးဆံနွယ်တွေကို ဖွပေးလိုက်ရင်း ကိုကိုသက်ခါးလေးကိုပါ ကော့ကော့ပေးနေပါတယ်။မေမိုး
လည်း နှုတ်ခမ်းလေးကို တင်းတင်းလေးဖြစ်အောင် လုပ်ပေးလိုက်ရင်း လျှာလေးကိုအပြားလိုက်လေးလုပ်ပေးလိုက်တော့ ကိုကိုသက်က ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လေး ဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပေးနေပါတယ်။တော်တော်လေးကြာတော့ ကိုကိုသက်က မေမိုးပါးစပ်ထဲကနေ သူ့လီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်ရင်း အောက်ကိုပြန်ဆင်းသွားကာ မေမိုး
သွားရည်တွေနဲ့စိုရွှဲနေတဲ့ သူ့ဟာကို မေမိုးစောက်ပတ်ဝ လေးကိုတေ့လိုက်ကာ အဝနားမှာ စုန်ခြည်ဆန်ခြည်ပွတ်ပေးနေပါတယ်။
မေမိုး ညည်းသံလေးကိုကြားတော့ ကိုကိုသက်လည်း သူ့လီးကို မေမိုးစောက်ပတ်လေးထဲကို ဖိကာ အထဲကိုနည်းနည်းသွင်းလိုက်တော့ တစ်လက်မလောက်ဝင်
သွားပါတယ်။အပျိုစင်စောက်ပတ်လေးမို့ ကိုကိုသက် လီးကတစ်လက်မလောက်သာဝင်နေပေမယ့် မေမိုးတစ်ယောက် အသည်းခိုက်လောက်အောင်နာကျင်နေတာမို့
‘အား..အား..နာလိုက်တာ သေပါပြီ မရဘူးထင်တယ်’ လို့ပြောကာ ကိုကိုသက်ခါးလေးကို လက်နှစ်ဖက် နဲ့ပြန်တွန်းထားပါတယ်။ကိုကိုသက်ကလည်း ကျွမ်းကျင်
နေသူပီပီ ဆက်မသွင်းသေးပဲ မေမိုးနှုတ်ခမ်းလေးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးစုပ်ယူပေးလိုက်ကာ လက်တစ်ဖက်က နို့အုံလေးကိုနာနာလေးခြေပေးလိုက်ပါတယ်။
စောစောက နာကျင်နေတာတွေ ဘယ်ရောက်မှန်းမသိအောင် အရသာကကောင်းနေတာကြောင့် မေမိုးလည်း ကိုကိုသက်အနမ်းတွေကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးကို
ပြန်လည်တုန့်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ နောက်တော့ ကိုကိုသက်က ဖြည်းဖြည်းချင်း တရစ်ရစ်နဲ့ အထဲကိုသွင်းနေပါတယ်။
မေမိုးလည်း နာပေမယ့် နောက်ထပ်ခံစားရမယ့် အရသာထူးကို အဆုံးစွန်အထိခံစားလိုတဲ့စိတ်ကြောင့် အံကြိတ်ကာခံနေပါတယ်။အထဲကို တစ်ဝက်ကျော်ကျော်
လောက် ရောက်သွားတော့ အတွင်းပိုင်းက လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် တစ်စုံတစ်ခုက ဆီးကာနေတာကြောင့် ရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်။မေမိုး လည်းနာ
လွန်းလို့ ရှုံ့မဲ့နေပါတယ်။နဂိုထဲက စောက်ခေါင်းလေးက ကျဉ်းနေတဲ့အပြင် အပျိုမြေးလေးကပါ ခံနေ တာကြောင့် မေမိုး စောက်ခေါင်းထဲ တင်းကျပ်ပြည့်လျှံနေပါ
ကိုကိုသက်ကတော့ ဆက်မသွင်းသေးပဲ မေမိုးနားသီးလေးကိုစုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်အသာလေး ပြန်ထုတ်လိုက်ပြီး အဖျားလေးတင်ပဲ အသာလေးညှောင့်
ပေးနေပါတယ်။မေမိုးလည်း နာကျင်နေတာတွေ သက်သာလာကာ စောက်ခေါင်းထဲက ကိုကိုသက်လီးကြီးကို အဆုံးအထိဝင်စေချင်နေတာကြောင့် ကိုကိုသက် ခါးလေးကို လက်နဲ့ကိုင်ကာ နည်းနည်းဆွဲယူလိုက်ပါတယ်။စောက်ခေါင်းထဲမှာလည်း အရည်ကြည်တွေထွက် လာတာမို့ နည်းနည်းတော့ အဝင်အထွက်လေးသွက်
‘မေမိုး..နည်းနည်းတော့အောင့်ခံနော် တော်ကြာကောင်းလာတော့မှာပါ’ လို့ပြောလိုက်တော့ မေမိုးလည်း အဆုံးထိခံချင်နေပြီမို့ ခေါင်းလေးပဲညိတ်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကိုကိုသက်က မေမိုးနှုတ်ခမ်းလေးကို သူ့နှုတ်ခမ်းအစုံနဲ့စုပ်ယူပေးလိုက်ရင်း လက်ကမေမိုးခါးလေးကို ထိန်းကာ အားနည်းနည်းစိုက်ပြီး သူ့လီးတန်ကြီး ကိုအထဲကို
ဖိကာ သွင်းပေးလိုက်တော့ အချစ်လမ်းကြောင်းမှာ တံတိုင်းတစ်ခုလို ဆီးကာနေတဲ့ မေမိုးအပျိုမြေး လေးကိုပါ မညှာမတာထိုးခွဲသွားတဲ့အပြင် စောက်ခေါင်းလေးက
ကျဉ်းတာမို့ နှုတ်ခမ်းသားလေးပါ ဖတ်ခနဲ ကွဲသွားကာ ဆီးစပ်နှစ်ခုထိလုနီးနီး အတားအဆီးမရှိဝင်ရောက်သွားပါတယ်။
မေမိုး တစ်ယောက် အသည်းပေါက်မတတ် နာကျင်လွန်းတဲ့ ဝေဒနာကိုခံစားလိုက်ရတာမို့ အသားကုန် အော်ဟစ်လိုက်ချင်ပေမယ့် ကိုကိုသက်ကနှုတ်ခမ်းကို လုံးဝလွှတ်မပေးတာကြောင့် မေမိုးအော်သံဟာ ကိုကို သက်ပါးစပ်ထဲမှာပဲ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။မေမိုး လက်နှစ်ဖက်က အိပ်ယာခင်းစကို တင်းတင်းကြီး
ဆုပ် ကိုင်ထားလိုက် ကိုကိုသက်ကျောပြင်ကြီးကို ကုတ်ခြစ်လိုက်နဲ့ ဝေဒနာကိုခံစားနေရပါတယ်။
‘မကြောက်ပါနဲ့ မေမိုးရယ် ရှေ့ဆက်ကောင်းဖို့ပဲရှိတော့တာ အပျိုမြေးလေးပေါက်သွားတာပါ’ လို့ပြန်ပြော ကာ နည်းနည်းချင်းသွင်းလိုက် ပြန်ထုတ်လိုက်နဲ့လုပ်ပေး
နေပါတယ်။လက်နှစ်ဖက်ကလည်း မေမိုးနို့အုံလေးကို ညှစ်ပေးလိုက် ပါးစပ်နဲ့ကုန်းကာစို့လိုက် လုပ်ပေးနေပါတယ်။
မေမိုးလည်း ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်နေရာမှ ကိုကိုသက်ရဲ့ ကျွမ်းကျင်စွာ ကိုင်တွယ်မှုတွေကြောင့် အထဲကနာကျင်မှုတွေပျောက်ကာ တဖြည်းဖြည်းကောင်းလာတဲ့ အရသာကိုစတင်ခံစားလိုက်ရပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုလည်း ကားသထက်ကားပေးလာပါတယ်။အပေါ်ကနေ ကိုကိုသက်တစ်ချက်သွင်း လိုက်
တိုင်း ခါးလေးကိုလည်း တစ်ချက်တစ်ချက် ပြန်ကော့ပေးလာပါတယ်။ကိုကိုသက်က ခဏရပ်လိုက်ရင်း
ကိုကိုသက်လည်း မေမိုးစောက်ပတ်လေးထဲကို လီးတန်ကိုပြန်သွင်းလိုက်ကာ ခါးလေးကိုမှန်မှန်လေး ညွှတ်ပေးကာ ညှောင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။မေမိုးတစ်ယောက်
လည်း နာကျင်တာရော ကောင်းတာရော အရသာ နှစ်ခုလုံးကို တစ်ပြိုင်နက်ခံစားနေတာမို့ ပါးစပ်လေးဟကာ ခေါင်းလေးပါ ဘယ်ညာယမ်းနေပါတယ်။
နောက်တော့ တဖြည်းဖြည်းအရသာတွေ့လာတာမို့ ကိုကိုသက်ခါးလေးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့လာဖက် ထားပါတယ်။ကိုကိုသက်လည်း ဆောင့်ချက်တွေက ပိုမြန်လာပါ
တယ်။အခန်းထဲမှာတော့ ဆီးစပ်နှစ်ခုရိုက်သံ တစ်ဖတ်ဖတ် မြည်နေပါတယ်။
ကိုကိုသက် စိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ မေမိုးအဖုတ်လေးကွဲထွက်မတတ် အဆက်မပြတ်ညှောင့်ပေးနေတာမို့ မေမိုးလည်း အားကျမခံ အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားတွေနဲ့ ကိုကို
သက်လီးကို ညှစ်ပေးနေပါတယ်။မေမိုး အထဲကနေ ညှစ်ပေးတာ ကောင်းလွန်းလို့ ဆောင့်ချက်တွေတောင် တစ်ခါတစ်ခါရပ်သွားရပါတယ်။နောက်တော့ နှစ်ယောက် သား ကာမပန်းတိုင်ကို တက်ညီလက်ညီ လှော်နေကြရင်း ကိုကိုသက်က မေမိုးစောက်ခေါင်းထဲ သုက်ရည်တွေ ပန်းထည့်လိုက်နေတုန်း မေမိုးလည်း တစ်ကိုယ်လုံး ဆတ်ခနဲဆတ်ခနဲ တုန်တက်သွားကာ အကြောထဲသာမက ရိုးတွင်းချဉ်ဆီပါဆိမ့်သွားလောက်အောင် ကာမအရသာထူးကြီးကို ခံစားလိုက်ရတာမို့ ကိုယ်ပေါ်ကို ပြုတ်
ကျလာ တဲ့ ကိုကိုသက် ကိုဆီးကာဖက်ထားလိုက်ပါတော့တယ်။ကိုကိုသက်က မေမိုးနှုတ်ခမ်းလေးကို မြတ်နိုးစွာနမ်းရှိုက်နေတော့ မေမိုးလည်း အားရကျေနပ်မှုတွေ
နဲ့ ကိုကိုသက်ကိုပြန်နမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့ ကိုကိုသက်က ဘေးဖက်ကိုလှိမ့်ဆင်းလိုက်ရင်း အမောဖြေနေပါတယ်။မေမိုး စောက်ပတ်ထဲက ကိုကိုသက်
လီးတန်ကြီးလည်း ပြွတ်ခနဲကျွတ်ထွက်သွားတာမို့ အထဲကသုက်ရည်တွေရော သွေးစသွေးနလေးတွေပါဆင်းလာတာကိုကြည့်ရင်း နှမြောသလိုလို ဝမ်းနည်းသလို လိုဖြစ်လာတာကြောင့် မေမိုးတစ်ယောက် ကိုကိုသက်ရင်ခွင်ပေါ်ကို မျက်နှာအပ်ပြီး ရှိုက်ငိုမိလိုက်ပါတယ်။
‘မောင့်ကိုယုံပါမေမိုးရယ်။မောင်လည်းမေမိုးကိုအရမ်းစွဲနေပြီကွာ’ လို့ပြောက မေမိုးပါးလေးကိုနမ်းလိုက် ပါတယ်။နောက်တော့ ကိုကိုသက်က စားပွဲပေါ်ကတစ်ရှူးနဲ့
မေမိုး စောက်ပတ်ကိုသုတ်ပေးကာ သန့်ရှင်းရေးလုပ် ပေးနေပါတယ်။မေမိုးလည်း ပေါင်လေးကားပေးလိုက်ကာ ကိုကိုသက်လုပ်နေသမျှကို မျက်လုံးအဝိုင်းသားလေး
ကိုကိုသက်က အိပ်ယာပေါ်ပြန်လှဲလိုက်ရင်း မေမိုးကိုယ်လုံးလေးကိုပါဖက်ကာ သူ့ဘေးကိုလှဲချလိုက်ပါ တယ်။နောက်တော့ မေမိုးနဖူးလေးကိုနမ်းလိုက်ရင်း နား
နေပါတယ်။မေမိုးလည်း အဓိပါယ်မဲ့စွာ ကိုကိုသက်ရင် ဘတ်ကိုပွတ်သပ်နေပါတယ်။ခဏနေတော့ကိုကိုသက်က
‘မောင့်ကိုချစ်လို့သာ မေမိုးအောင့်ခံနေတာ တကယ်နာလို့ပါ’ ပြောမယ့်သာပြောရတာပါ မေမိုးလည်း နောက်ထပ်ဒီအရသာကိုခံစားလိုတာ ငြင်းဆန်ဖို့အင်အားမရှိပါ
‘အစမို့ပါကွာနောက်တော့ ကောင်းလာမှာနော်’ လို့ပြောရင်းမေမိုး နှုတ်ခမ်းလေးကို စုပ်ယူပေးလိုက်ပါ တယ်။မေမိုးလည်း မငြင်းဆန်နိုင်တော့ပဲ ကိုကိုသက်ခေါ်
ဆောင်ရာ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် အရသာထူးကိုခံစား ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့် ကိုကိုသက်ကလည်း ဖက်ထားတဲ့လက်တစ်ဖက်က မေမိုးနို့လေးတွေကို
ဖြစ်ညှစ်ပေးလိုက်တော့ ကာမအရသာတွေတရှိန်းရှိန်းနဲ့ တက်လာပါတော့တယ်။
‘ကိုင်ကြည့်လေ’ လို့ ပြောပြောဆိုဆို မေမိုးလက်ကိုသူ့လက်နဲ့ကိုင်ကာ လီးပေါ်တင်ပေးလိုက်တော့ မေမိုးလည်း မရဲတရဲလေးကိုင်ကြည့်ပါတယ်။အရုပ်အသစ်ရ
ထားတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်လို မေမိုးကိုကိုသက် လီးကြီးကို နေရာအနှံ့ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်ပေးနေပါတယ်။ကိုကိုသက်က
ကိုကိုသက်ဆီက အသံလေးကြားလိုက်တော့ မေမိုးလည်း အားရှိသလိုဖြစ်သွားကာ လျှာလေးနဲ့ပါ ထိုးပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုကိုသက်ကလည်း မေမိုးနို့သီးခေါင်း
လေးတွေကို လက်နဲ့ခြေပေးနေပါတယ်။နောက်ပြီး ကိုကိုသက်လက်က မေမိုးပေါင်ကြားထဲရောက်လာကာ မေမိုးစောက်ပတ်လေးကို လက်နဲ့ပွတ်ပေးနေပါတယ်။ေ
နာက်တော့ ကိုကိုသက်က တစောင်းလေးဖြစ်နေတဲ့မေမိုး ကိုယ်လုံးလေးကို သူ့ဖက်ဆွဲလိုက်ကာ မေမိုးပေါင် ကြားထဲ သူ့ခေါင်းဝင်လာရင်း မေမိုးစောက်ပတ်ကိုသူ့
မေမိုးလည်း အယက်ခံရတာကောင်းလို့ ပါးစပ်ထဲရောက်နေတဲ့ ကိုကိုသက်လီးကြီးကိုပဲ စိတ်ရှိလက်ရှိ စုပ်ပေးနေမိပါတယ။်ထို့အတူ ကိုကိုသက်ကလည်း မေမိုး
စောက်ပတ်လေးကို အဆက်မပြတ်ယက်ပေးနေပါ တယ်။တအောင့်နေတော့ မေမိုးလည်း ကိုကိုသက်ခေါင်းကို ပေါင်ကြားထဲအတင်းညှပ်ထားလိုက်ရင်း တစ်ကိုယ် လုံးတွန့်လိမ်လာကာ တစ်ချီပြီးသွားပါတယ်။
ကိုကိုသက်က မေမိုးကိုဆက်မစုပ်ခိုင်းတော့ပဲ ပက်လက်လေးပြန်လှန်လိုက်ပါတယ်။မေမိုးပေါင်ကြားထဲ ကိုဝင်ကာ ငုတ်တုတ်ထိုင်လိုက်ရင်း သူ့လီးကြီးကိုမေမိုး
စောက်ပတ်ဝကိုတေ့လိုက်ပါတယ်။ဒီတကြိမ်တော့ မေမိုး ကိုယ်တိုင် ကိုကိုသက်လီးကြီးကိုကိုင်ကာ စောက်ပတ်ဝကို တေ့ပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုကိုသက်က ဖြည်းဖြည်း
ဒီတစ်ခါတော့ မေမိုးလည်း သိပ်မနာတော့တာကြောင့် နှုတ်ခမ်းလေးကိုကိုက်ကာ ကျိတ်ခံနေပါတယ်။ ကိုကိုသက်က မှန်မှန်လေး အသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးနေပါ
ကိုကိုသက်လည်း ဆောင့်ချက်လေးတွေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြန်လာပါတယ်။မေမိုးကိုဆောင့်ပေးနေရင်း လက်က နို့တွေကိုလည်း ဆုပ်နယ်ပေးနေလိုက် နို့ကိုကုန်းစို့
လိုက်နဲ့လုပ်ပေးနေပါတယ်။မေမိုးလည်း ကောင်းလွန်းလို့ ကိုကိုသက်ခေါင်းကို ရင်ဘတ်မှာဖိကပ်ပေးထားလိုက်ပါတယ်။ကိုကိုသက်က နို့အုံတစ်ခုလုံးကို ပြုတ်ထွက်
‘အ..အ..အ…အ..မောင် အရမ်းချစ်တယ်’ လို့ပြောကာ ကိုကိုသက်ခေါင်းကို အပေါ်ကိုဆွဲလိုက်ရင်း ကိုကိုသက်နှုတ်ခမ်းကို စုပ်ကာနမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုကို
သက်လည်း အောက်ပိုင်းကဆောင့်ချက်တွေက တစ်စတစ်စ အရှိန်ရလာပါတယ်။
ကိုကိုသက် အားထည့်ကာဆောင့်ပေးလိုက်တော့ မေမိုးလည်း ဘယ်နှစ်ခါပြီးသွားမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး။တစ်ခါပြီးတိုင်း ကိုကိုသက်ပါးလေးကို တရွှတ်ရွှတ်နဲ့
နမ်းပေးနေလိုက်ပါတယ်။အထဲကိုဝင်လာ တဲ့ကိုကိုသက် လီးကြီးကိုလည်း မေမိုးရှိသမျှအားနဲ့ ညှစ်ပေးနေတာကြောင့် ကိုကိုသက်လည်း ဘယ်လိုမှ တောင့်မခံနိုင်
တော့ပဲ ဆတ်ခနဲဆတ်ခနဲ တွန့်တက်သွားကာ မေမိုးစောက်ခေါင်းထဲ ပူခနဲဖြစ်သွားပြီး မေမိုးကိုယ် ပေါ်ကို ကိုကိုသက်ကိုယ်လုံးကြီး ပြုတ်ကျလာပါတော့တယ်။မေမိုး
လည်း ကိုကိုသက်ကိုတင်းကျပ်စွာ ဖက်ထား လိုက်မိပါတော့တယ်ရှင်……….။
**************************************************************************** Posted by
စာအုပ်အဖြစ် သိမ်းယူလိုပါက အောက်က လင့်ခ် ကိုနှိပ်၍ ဒေါင်းလုပ် ရယူပါ။
post and pdf
အောစာအုပ်ဒေါင်းရန် DOWNLOAD လင့်ခ် ………………………………………………………………
♥DOWNLOAD♥ ♥ကန်ဘောင်ပေါ်က ရမက်ကြမ်း♥ မနက်စောစော နိုးလာကတည်းက ဦးမင်းမောင်တယောက် စိတ်ကတော်တော်ထန်နေမိသည်။ အိမ်ကနေ ငါးကန်ကိုရောက်နေတာ ၃ ရက...
♥မွတ်​စလင်​ ​အောကား (၁)♥ movie
"မွတ်​စလင်​မ ​အောကား movie ​တွေကို ​မျှော်​လင့်​​နေတဲ့ ​ဘော်​ဒါများအတွက်​ မွတ်​စလင်​ ​အောကား movie အပိုင်း ၁ ကို တင်​​ပေးလိုက်​ပါပြီ။ ...
"စာအုပ်အဖြစ်သိမ်းယူထားလိုပါက အောက်က လင့်ခ် ကိုနှိပ်၍ဒေါင်းယူလိုက်ပါ" ★DOWNLOAD အောစာအုပ်အားဒေါင်းရန်လင့်ခ်★ ______________________...
ရွှေစင်မမ(၂၈)-အမုန်းအဆွဲ ခံရတဲ့ ပွဲ-
"စာအုပ်အဖြစ်သိမ်းယူထားလိုပါက အောက်ကလင့်ခ်ကိုနှိပ်၍ဒေါင်းယူပါ" ★DOWNLOAD စာအုပ်ဒေါင်းရန် လင့်ခ်★ ________________________________...
♡ ချစ်တာအပြစ်လား? ♡(ဒုတိယပိုင်း)
တကယ်တော့ ဒီအချိန်မျိုးမှာ ဒီလိုအတွေမျိုးရှိတာ အကောင်းဆုံးမဟုတ်လား။ ကြားရတာ သိပ်ကောင်းတာပဲလေ။ ဒါကြောင့် ကျမ ကလည်း အလိုက်သတိနဲ့.. ''ခ...
အောစာအုပ်ဒေါင်းရန် DOWNLOAD လင့်ခ် *
အောက်မှာဒေါင်းယူပါ။ အောစာအုပ်ဒေါင်းရန် DOWNLOAD ဒေါင်းလုပ် လင့်ခ် ကိုနှိပ်ပြီး နောက်တမျက်နှာရောက်လျှင် ၅ စက္ကန့်မျှစောင့်ပါ။ပြီးရင် ညာဘက...
ကျမချစ်သူ လူပျိုရိုင်း (ပထမပိုင်း)
♥ကျမချစ်သူ လူပျိုရိုင်း♥ (Credit To "myanmarsex.nstars by amysoe) [ ပထမပိုင်း ] "စာအုပ်အဖြစ်ဒေါင်းယူလိုပါက ပို့ စ် ၏အောက်ဆုံးတွင...
♥ ကျမချစ်​သူ လူပျိုရိုင်း ♥ (ဒုတိယပိုင်း)
မွတ်စလင်မတွေကို ကျုံးပီး ဘွတ်ချင်တယ်